မှော်ဆရာ့ အိပ်မက်များ: 2010
ငါထပ်တူ မပြုခဲ့ရိုး အမှန်ပါ...
ခုဆို ရက်ပေါင်း တစ်သောင်းကျော်ခဲ့ပြီး....
ငါ့ရဲ့ အတိတ် စာမျက်နှာတိုင်းမှာ
Posted by Nay Linn Aung at 1:46 PM No comments:
သူ့ခါးက ရေဘူး ပေါက်နေတာတော့ သေချာတယ်
တစ်စ တစ်စနဲ့ ကန်ရေပြင် ပတ်ကြားအက်ရှာပြီ
မေတ္တာမိုးခေါင်တော့ လူ့ပြည်က ငဲရဲပြည်ဖြစ်
အဲ့ဒါ ဘယ်သူ့ အပြစ်ပုံချမတုန်း...
လနဲ့ကြယ် ဂဟေဆက်တာ အေးချမ်းခြင်း ပုံရိပ်ဆိုဘဲ
ကျွန်တော် ဗေဒင် မတတ်ပါဘူး
နဖူးတိုက်ဒူးတိုက် ဆွေနွေး ကောင်းနေတုန်း...
ပြဿနကို ပြဿနာနှင့် ရှင်းရင်း
ကိုယ့်ကို ကိုယ်သတ်သေကျ ...
Posted by Nay Linn Aung at 5:11 PM 1 comment:
ကျွန်တော်အဲ့ဒီ အိမ်လေးကို မပိုင်ဆိုင်ရခင်ကတည်းက စွဲလန်းတက်မက်ခဲ့ရတာပါ၊ မြင်ရုံတွေရရုံနဲ့ လူတိုင်းရဲ့ စိတ်ကို အေးမြခြင်းဆိုိတဲ့ နှစ်လိုဖွယ် စိတ်ခံစားမှုကို ပေးနေတဲ့ အိမ်ကလေးပါ...
အဝေးကဘဲကြည့်ကြည့် အနီးကပ်ကြည့်ကြည့် ဘယ်လိုမှ ပြောင်းလဲမှုမရှိခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့် သစ်ခေါင်းအိမ်ကလေးပါဗျာ...
အဲ့ဒီအိမ်ကလေးကို စွန့်ခွာပြီး အခုလိုမျိုး အဝေးကြီးမှာ တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်ဆန်ဆန် လာနေရလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်လိုမှ မတွေးခဲ့ဘူးရိုးအမှန်ပါဘဲဗျာ...
မှန်တာပြောရရင် ကျွန်တော့် ရင်ထဲက အလွမ်းအဆွေးတွေကို ချပြရရင်ဖြင့် အလင်းနှစ်သန်းချီပြီး အချိန်ယူတွက်ရေလို့ မရနိူင်ပါဘူးဗျ..
အခုကျွန်တော်ချရေးထားတာ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ထဲက လက်ရှိခံစားမှုထက် ဆယ်ပုံတစ်ပုံမက နည်းနေပါသေးတယ်...
ကိန်းဂဏန်းတွေကို ကျွန်တော်အမုန်းဆုံးပါဘဲ လူကုန်ထန်တွေ နိူင်းပြု တိုင်းယှဉ်တာများလို့လေ...
အဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းတွေများ မရှိခဲ့ရင် သူတို့ ဘယ်လိုများ အသက်ရှင်ကျမည်မသိ့...
အသိ့၊ အမြင် တွေက ခံစားချက်တွေကို ပုံစံပြောင်းစေတယ်ဆိုတာကို လက်ခံ သဘောတူနိူင်သူ မည်မျှရှိခဲ့ လေသနည်း ?
လူချင်းတူပေမဲ့ အသက်ရှုကွဲတယ်ဆိုတာ သူငယ်ချင်းတို့ လက်ခံယုံကြည် နိူင်ပါသလား ?
အခုအချိန်မှာ ကျွန်တော့်အတွက် တစ်ကယ်လိုအပ်နေတာ ကျွန်တော့်ရဲ့ သစ်ခေါင်း အိမ်ကလေးပါ...
ငါတစ်နေတော့ မင်းစီကို အရောက်ပြန်လာခဲ့မယ် အိမ်ကလေးရေ...
Posted by Nay Linn Aung at 5:54 PM2comments:
ခေါင်းစည်မဲ့သော ညနက်နက်တွေထဲမှာ ပေါက်ကွဲစေတတ်တဲ့ ရေခဲတွေ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ကျွန်တော် ရှိုက်ရှိုက်သွင်းနေရတာ သူမသိ့စေချင်လိုက်တာ...
ဖွာလက်စ ဆေးလိပ်တိုကို အသာဘေးချပြီးတော့ ခေါ်ဖီခါးခါး တစ်ကြိုက်လောက် အရသာခံပြီး ကျွန်တော်သောက်လိုက်မိ့တယ်၊ စိတ်ကူးထဲကနေ အဆက်အစပ်မရှိထွက်ကျလာတဲ့ စာသားတစ်ချို့လည်း အခု ဒီပိုစ်ထဲကိုရိုက်ထည့် ပြီးသားဖြစ်နေပြန်တယ်။ ကျွန်တော်အာရုံထဲ အတွေးထဲ ရုတ်တရက် ဟင်းလင်းပြင်ကြီး တစ်ခု ပြုတ်ကျလာပြန်တယ်၊ ကျွန်တော့် မပီဝိုးတ၀ါး တွေနေ့ရတာ အရောင်အသွေးစုံ လူမျိုးပေါင်းစုံ ပေါ်လာလိုက် ပျောက်သွားလိုက်၊ ကျွန်တော့်စိတ်တွေကို ပြန်စုစည်းဖို့ ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အချည်းနှီးပါဘဲ၊ အဲ့ဒီဟင်းလင်းပြင်ကျယ်ကြီးထဲက မပီဝိုးတ၀ါးမြင်ကွင်းတွေနောက်ကိုသာ စိုက်လိုက်မတ်တပ် လိုက်ပါစီမျှောနေပါတော့တယ်။
ကျွန်တော့်မြင်ကွင်းတွေေ၀၀ါးလိုက် ပျောက်သွားလိုက် အာရုံစိုက်လေ ပိုဆိုးလေဖြစ်နေပါတယ်၊ အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်တော့် စိတ်ကို လျှောချလိုက်တယ်၊ ဗြုန်းကနဲ့ဆို ကျွန်တော့်မှာ အတောင်တစ်စုံ ပေါက်လာတယ်၊ နေရင်ထိုင်ရင် လူလိုလို ငှက်လိုလိုဆိုတော့ “လူငှက်”ပေါ့ဗျာ...၊ ကျွန်တော်လည်း အကြိုက်တွေ့ သွားပါတယ်၊ ဟိုးငယ်ငယ် ကတည်းက ငှက်တွေလို လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွား ၀ဲပျံနေချင်တဲ့်စိတ်တွေ ကိန်းအောင်နေခဲ့တာ၊ အခုတော့ကျွန်တော်ဆန္ဒတွေပြည့်ပြီဗျ...
စစချင်းတော့ အထာမကျသေဘူး၊ ကျွန်တော့် အတောင်ပံတွေကို ကောင်းကောင်း မထိန်းနိူင်သေဘူးဗျ...
နောက်တော့ တဖြေးဖြေးကျင့်သား ရလာတယ်...
မိုးတိမ်တွေရဲ့ အတွေ့အထိ့က ကျွန်တော်ကို ကြည်နှုးမှုတွေ ပေးတယ်ဗျ...
အဲ့ဒီလိုနဲ့ လေသင့်ရာ ၀ဲပျံသွားလိုက်တာ ဘယ်ကို ရောက်လို့ ရောက်မှန်းမသိ့အောင်ပါဘဲ...
နောက်တော့ တဖြေးဖြေးခြင်း နိမ့်ဆင်းနေသလိုခံစားရတယ်၊ ကျွန်တော့် အတောင်ပံတွေကို တစ်စုံတစ်ရာသော စွမ်းအင်တွေက ထိန်းချုပ်နေသလိုဘဲ၊ သေချာတယ် ကျွန်တော် သူမစက်ကွင်းထဲ ၀င်မိ့သွားပြီး...
တဖြည်းဖြည်းမြေပြင်က အရာတွေ ပီပြင်လာတယ်၊ ကျွန်တော်တွေ့မြင်နေရတာက စိမ်းလွှလွှ မြက်ခင်းပြင်ရယ်၊ တောအုပ်တောင်တန်းတွေနဲ့ အတူ မြင်ခင်းနှင့် တောအုပ်အစပ်က အိမ်လေးတစ်လုံး
မီးခိုးငွေ့တွေ ထွက်နေပုံထောက် တစ်စုံတစ်ယောက် ရှိနေဟန်တူရဲ့...
ကျွန်တော်မြေပြင်နှင့် မထိ့တွေ့ခင်လေးတင် ဗြုန်းဆို လွင့်ပျံနေတဲ့ မီးခိုးတွေ ပျောက်သွားပြန်ပါတယ်...
အဲ့ဒီနောက် ထူးခြားခြား သင်းပျံပျံ မွှေးရနံ့တစ်ချို့ ကျွန်တော့်ကို စီးကြို နှုတ်ဆက်ကျပြန်တယ်...
ကျွန်တော် အိပ်ပျော်သလို မူးမေ့သလိုဖြစ်သွားတယ်၊ ကျွန်တော် ပြန်သတိ့ရလာတော့ ကျွန်တော် အတောင်ပံတွေ မရှိတော့ဘူး၊ အားအင်တွေလည်း ယုတ်လျှော့နေသလို ခံစားရတယ်...
ကျွန်တော် ရောက်နေတဲ့ အခန်းက ခုနအိမ်းကလေးထဲက အခန်းတစ်ခု ဖြစ်မယ်ထင်တယ်...
ဘယ်သူ့မှ မရှိသလို အပ်ကျသံပင် ကြားရလောက်အောင် အိမ်ကလေးရဲ့ စိတ်ငြိမ်မှုက ကျွန်တော့်ကို သွေးပျက်စေတယ်...
ရယ်သံ သဲ့သဲ့ ကြားရတယ်၊ ပြီးတော့ ပျောက်သွားပြန်တယ်...
ကျွန်တော့် အသိ့စိတ်ဝင်လာပြီး၊ တအားကြုံးအော်မိ့တယ်...
“အတောင်ပံတွေ ပြန်ပေးပါ” အသံနက်ကြီးနဲ့ကို တအားအော်မိ့တယ်
ပြီးတော့ လေဟာနယ်ထဲ ရောက်သလို ခံစားရတယ်....
ဒုန်း ဒုန်း ဂ လုန်း.....
ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး ချွေတွေ ရွှဲရွှဲ စိုနေတယ်၊ ကျွန်တော်အိပ်ခန်ထဲကို အမေသောက်ရေ တစ်ခွက်နဲ့
ဒီကလေးနှယ့်နော်၊ အိပ်ရာမ၀င်ခင် ဒီဝထ္တုတွေ မဖတ်ပါနဲ့ဆိုတာ ပြောလို့ကိုမရဘူး
အမေယူလာတဲ့ ရေခွက်ကို တစ်ကြိုက်မော့ချလိုက်ပြီး၊ အမေ့ကို ပြုံးပြီး ကြည့်နေမိ့တယ်။
အမေရယ် သားအိပ်ရာမ၀င်ခင် စာမဖတ်ရင် အိပ်လို့ မပျော်လို့ပါဗျာ...
အမေယူလာတဲ့ သောက်ရေခွက်အတွက် ကျေးဇူးပါအမေ...
Posted by Nay Linn Aung at 5:19 PM No comments:
ဘ၀ဆိုတာ မျည်းဖြောင့် တစ်ကြောင်း မဟုတ်ခဲ့သလို
အဲ့လိုဘဲ အလှတရားဆိုတာလည်း ထာဝရ အမြဲ မတည်ရှိနိူင်ပြန်ဘူး
အို၊ နာ၊ သေ ဘာမှ မမြဲတဲ့ ဒီလောကကြီးထဲမှာ
အဲ့ဒီ ဒုက္ခသစ္စာကို လူတွေ ဘာကြောင့် မေ့ထားကျသလဲ...
အတ္တတွေ တစ်နင့်တစ်ပိုးနဲ့ ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုအတွက်
အသက်ရှုနှုန်းတွေ ခလုတ်တိုက်သည့် အထိ့ အလုပ်ရှုပ်ကျ...
အနိမ့် အမြင့် အတက် အကျ
ငါလည်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အလိုလိုနေရင်
Posted by Nay Linn Aung at 12:32 AM No comments:
အရှေ့နှင့် အနောက် မညီမျှတဲ့
လိုက်လေ ဝေလေး ပြေနေလည်း
ဒီမြို့လေးမှာ ကျွန်တော် မပျော်တော့ဘူး...
အတ္တတွေကို ခေါင်းမှာ ပန်ထားတဲ့
အချိန်တန်တော့ မြေကြီးထဲ သွားရမှာဗျ...
ထာဝရ မခွဲခွာ အမြဲသာ
Posted by Nay Linn Aung at 11:03 PM No comments:
E = mc2 ကြောင့် လည်းပါတယ်
စိတ်နဲ့ ဒီအတိုင်းလွင့်ချင်ရာ လွင့်ခွင့်ကိုတောင်
မျှမျှတတဘဲ ဆွေးနွေးကြရအောင်..မိတ်ဆွေ။ ။
Posted by Nay Linn Aung at 9:07 AM No comments:
'' ညပျောက်ငှက် ''
အဲ့ဒီ ညနေခင်း ခါးခါးတွေကို
Posted by Nay Linn Aung at 2:08 AM No comments:
အဲ့ဒီ သေနတ်တွေ စစ်ဖိ့နပ်တွေအောက်မှာ
ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ ၁၉၈၈ အိမ်မက်ဆိုးများလိုပေါ့...
ငိုရယ် ရီမော၊ မျက်ရည်စတွေနဲ့
ဟားတိုက် ရီမော၊ ဒေါသတွေမြိုသိပ်
ကြိုဆိုကြမယ့် ၂၀၁၃ ရက်စွဲများအတွင်
၂၀၁၅ ရောက်မှ ဒို့ လက်သန်းတွေရဲ့အား
မကြာခင် ၂၀၁၆ ကို နှုတ်ဆက်ပြီ
၂၀၁၇ မှာ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ
တစ်ပွေ့တစ်ပိုက်နှင့် ငါတို့ အသက်ငွေ့ငွေ့တွေ
Posted by Nay Linn Aung at 9:09 AM No comments:
လွတ်လပ်ရေး သူရဲကောင်း ကြယ်ပွင့်တွေ
အချိန်တန် အိမ်ပြန်ရမဲ့ သူချင်းအတူတူ
ရောက်လေရာဘုံဘ၀မှ ငံလင့်နေတဲ့ ဒီပန်းတိုင်
ငါတို့ အတူတူ ချီတက်ကျဖို့
အမြဲအသင့် ပြင်ထားပါ သူငယ်ချင်း....
Posted by Nay Linn Aung at 1:21 AM No comments:
“ပူတယ်လေ ဆယ်နွေကဲ၊ နာဂစ်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ”
“ပူတယ်လေ ဆယ်နွေကဲ၊ နာဂစ်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ” ဆိုသလို ဖြစ်နေပြီး၊ ကမ္ဘာနဲ့ အ၀ှမ်း စိမ်းလန်းစိုပြည်ဖို့ တိုက်တိုက်တွန်းတွန်း လုပ်နေချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ရန်ုကုန်မြို့ကြီးကတော့ဖြင့် သစ်ပင်တွေကြိုးတို့ကျဲတဲနဲ့ တော်တော်လေးကို ပြင်းပြင်းပြပြ ပူလောင်မှုကို ခံစားနေရပါတယ်၊ စိတ်မကောင်းစရာဘဲ....
သဘာဝ သယံဇာတ အရင်းအမြစ်တိုင်းတွင် အတိုင်းတာ ပမာဏရှိစမြဲပင်ဖြစ်သည်၊ သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို ထုတ်ယူသုံးစွဲပြီးလျှင် ပြန်လည်ထိန်းသိမ်း ဖြည့်တင်းဖို့ရာလိုအပ်ပါသည်၊ မဖြည့်တင်းပါက သစ်တောပြုန်းတီခြင်း၊ မြစ်ချောင်းများ ရေခန်းခြောက်ခြင်း၊ မြေအောက်ရေ၏ အရည်အသွေးနိမ့်ကျခြင်း၊ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်း စသော သဘာဝဘေးအန္တာရာယ်များ ပေါ်ပေါက်လာနိူင်ပေသည်။
ဥတုရာသီ တောကိုမှီ ဆိုသည့်စကားအတိုင်း သစ်တောပြုန်းတီးရာမှစ၍ မြေဆီလွှာပျက်စီခြင်း၊ မြေအောက်ရေခမ်းခြောက်ခြင်း၊ မြစ်ချောင်းများ တိမ်ကော ပပျောက်ခြင်း ဆက်တိုက်ဆိုသလို မမြင်နိူင်သည့် ဆုံးရှုံးမှုများစွားကို ရင်ဆိုင်ရနိူင်ပေသည်။ တောတောင် ရေမြေ အနေအထားသည် နေရာဒေသ၏ ရာသီဥတုနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ် ပတ်သက်နေသည်ဆိုလျှင် လွန်မည်မထင်၊ ဤကဲ့သိုပင် ဤတော ဤတောင်များကို မှီတင်းနေထိုင်ကျက်စားနေသော ကျေးငှက် သာရကာများ၊ တောကောင်ကြီးငယ်များ သည်ပင်လျှင် ပျောက်ကွယ်၍ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားနိူင်သော ကြီးစွာသော အရင်းအမြစ်ဆုံးရှုံးမှုများပင် ဖြစ်ပေါ်လာနိူင်ဘွယ်ရာရှိပေသည်။
အခုလက်ရှိ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်တွင် အချို့နေရာတွေဆိုရင် သောက်သုံးရေပြတ်လတ်မှုနဲ့ ကြုံတွှေ့နေရပါတယ်၊ ရန်ကုန်မြို့လို မြို့ကြီးမှာလည်း လွန်စွာဆိုးရွားတဲ့ ပူလောင်မှုကို ခံစားနေရပါတယ်၊ မုတ်သုံ အ၀င်နောက်ကျလိမ့်မယ်လို့ ပညာရှင်တွေကလည်း ခန့်မှန်းနေကျပါတယ်၊ စလာပါပြီ သဘာဝ အရင်းအမြစ်ဆုံး`ရှုံးမှုတွေ
လောပိတလို နေရာမျိုးရေခန်းသွားရင်၊ ဧရာဝတီမြစ်ကြီး ကောသွားခဲ့ရင်၊ သစ်တောတွေ တောင်ဂတုံးဖြစ်သွားခဲ့ရင်...
အဲ့ဒါတွေကို မသိ့ကျိုးကျွန်ပြု လစ်လှူရှူ့ထားမယ်ဆိုရင်ဖြင့် မတွေးဝံလောက် အောင်ကို အန္ဆာရာယ်ကြီးမား လာနိူင်ပါတယ်....
သဘာဝကိုချစ်သော စိတ်များဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်နိူင်ကျပါစေဗျာ...
Posted by Nay Linn Aung at 2:09 AM No comments:
ဒေါက် ဒေါက် ဒေါက်
အခန်းတံခါးကို ဘယ်သူလာခေါက်နေသလဲ ? ငါတံခါးခေါက်သံ ကြားလိုက်ရတာ တစ်ကယ်လား ?
ဇဝေဇ၀ါနဲ့ အိပ်ရာထက်မှာ ထထိုင်ပြီး လမ်းထလျှောက်ဖို့ ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်၊ ဗြုန်းကနဲဆို အခန်းထောင့် အမှောင်ထုထဲ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် နွံနစ်သလို စီးဆင်းသွားတယ်၊ ကျွန်တော် အသည်းအသန် ရုန်းထွက်ဖို့ ကြိုစားတယ် ချွေးစေးတွေ တဒီးဒီး ကျလာသည့်တိုင်း အချည်းနှီးပါဘဲ၊ တဖြည်းဖြည်း အမှောင်ထုထဲ တိုးဝင်သွားလိုက်တာ ကျွန်တော် ခုတင်နဲ့တော်တော်လေးဝေး သထက်ဝေးလာခဲ့ပါပြီ၊
ငါဘာဖြစ်တာလဲ၊ ကိုယ့်ကို ကိုယ်ပြန်စန်းစစ်ကြည့်တော့လည်း၊ အိပ်မက်လိုလို တစ်ကယ်လိုလိုပါဘဲ။
အဲလိုနဲ့ ကျွန်တော် အလိုက်သင့်ကလေ မျှောပါသွားလိုက်တာ ကျွန်တော် အခန်းမဟုတ်တဲ့၊ ကျွန်တော် တစ်ခါမှ မရောက်ဘူးတဲ့ နေရာတစ်ခုကို ရောက်သွားတယ်၊ အဲ့ဒီနေရာက စီမ်းလန်း စိုပြည်နေတာကတော့ တော်တော်လေး ထူးခြားတယ်၊ ကျွန်တော့် အိပ်မက်ထဲက စိတ်ကူးယာဉ်ဖူးတဲ့ ပန်းခြံလေးထဲ ရောက်နေသလိုခံစားရတယ်ဗျ၊ စောစောလေးက ညစ်ငြူးနေတဲ့စိတ်တွေ တစ်ခဏအတွင်း ပြန်လည်လန်းဆန်းလာတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း မသိ့စိတ်စေရာ လိုက်ပါသွားရင်းက၊ လူတွေပြုပြင်ထားတဲ့ ရေတံခွန် အသေးစားလေး တစ်ခုအနား ရောက်မှန် မသိ့ရောက်လာခဲ့တယ်၊ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ရေအလျှင်အတိုင်း စီးဆင်း လိုက်ပါသွားပြန်တယ်၊ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တမ်းတ မိ့တာက ရွက်လှေတစ်စင်းနဲ့ ရွက်လွှင့်လိုက်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတစ်စုံပါဘဲ။
ကျွန်တော့်အာရုံထဲမှာ ဖြူ၊ ပြာ၊ နီ၊ ၀ါ အရောင်ပေါင်းစုံ စီုးမိုးလာပြန်ပါတယ်၊ အာရုံတွေလည်း အရောင်တွေနောက် ကောက်ကောက်ပါ အပြေးကလေး ကပ်ညိ့သွားပြန်တယ်၊ အရောင်တွေ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဖြည်းဖြည်းခြင်း ရောစပြုလာတယ်၊ အဲ့ဒီလိုနဲ့ ပိန်းပိတ်မှောင်သွားပြန်တယ်၊ အမှောင်ထုထဲက ပြာလဲ့လဲ့ မီးတောက်ငယ်တစ်ခု ရှေးရိုး ဂီတသံစဉ် တစ်ပုဒ်နဲ့ အတူကခုန်နေတာကို
ကျွန်တော်မြင်နေရတယ်၊ သံစဉ်နောက်ကို အာရုံတွေ အစုအလိုက်အပြုံလိုက် လဲပြို ကျသွားပြန်ပါတယ်၊ တေးသွားတွေက နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်နဲ့ ဂီတရဲ့ အရာသကို အစွမ်းကုန် ကျွန်တော်ခံစားမိ့နေတယ်၊ မျက်စိ့တွေလည်း အလိုလိုမှိတ်လျှက်နဲ့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် တေးသွားတွေနှင့် တစ်သားတည်းဖြစ်သွားတယ်ဗျာ၊ အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်ကို ကျွန်တော် တော်တော်လေးနှစ်ခြိုက်မှန်းကို နောင်တော်တော်လေးကြာမှ သိ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဗြုန်းကနဲ့ဆို ရုတ်တရက် တိတ်ဆိတ်သွားပြီး၊ ကျွန်တော် မျက်လုံး ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ဘာမှ မရှိတဲ့ ဟင်းလင်းပြင်ကြီးထဲမှာ အလင်းရောင်တွေနဲ့ ကျွန်တော်ဘဲကျန်ခဲ့တယ်၊ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ထဲမှာလည်း အလားတူ ဟင်းလင်းပြင်ကြီး တစ်ခုရှိနေခဲ့ပါတယ်၊ ဘာဆက်ဖြစ်မယ်၊ ဘယ်လိုခရီးဆက်ရမယ် ကျွန်တော်တစ်ကယ့်ကို မသိ့ခဲရိုးအမှန်ပါ၊ ကျွန်တော်စိတ်တွေလည်း ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်ကုန်တယ်၊ ဗလာကျင်ဖြစ်နေတဲ့ နှလုံးသားကို ကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်၊ သူဘာမှ ပြန်မဖြေဘူး....
ငါဘာ့အတွက် ရှင်သန်တာလဲ ?
Posted by Nay Linn Aung at 1:56 PM No comments:
အခု ဒီ post လေးကို စစချင်း ဘာမှမရေဘဲ post အလွတ်တစ်ခုအနေနဲ့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး Draft ထဲသိမ်းပြီးတော့မှ ကျွန်တော်ဘာသာ ပြုံးမိ့သေးတယ်၊ အေးပေါ့လေ ခေါင်းစဉ်ကိုက “ ဒီလိုပါဘဲ ” ဆိုမှတော့ အဲ့လောက်တော့ ဖြစ်သင့်ပါတယ်ဗျာ..
ရင်းနှီးခင်မင်ရတဲ့ အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေတွေ ဆုံတွေ့တိုင်း မေးလေ့ရှိကျတယ်၊ ဟေး ဘယ်လိုလဲဗျ၊ အလုပ်အကိုင် အခြေအနေ အစစ အရာရာ အဆင်ပြေရဲ့လား ဆိုတော့ ပြန်ဖြေဖြစ်ကျတဲ့ အဖြေလေးကတော့ “ ဒီလိုပါဘဲ” တဲ့ဗျ၊ လူတိုင်းလူတိုင်း ကိုယ်ပိုင် အချိန်တွေကို အရင်းအနှီးလုပ် ၀မ်းစာအတွက်ရှာဖွေသလို၊ ရှေးရေးအတွက်စုဆောင်းနိူင်ဖို့ ကြိုစားရုန်းကန်နေရပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ရုတ်တရက်အဲ့လို မေးလာရင် ဖြေစရာ အဖြေတော်တော်လေးအခက် တွေ့ရပါတယ်၊ ပိုက်ဆံအရင်းအနှီး ရှိတဲ့သူများလည်း ထို့အတူပါဘဲ အရောင်း အ၀ယ်တွေ ထိုင်းရင် အဲ့လိုဘဲဖြေတတ်ကျတယ်ဗျ။
အဲ့လို မေးခွန်းမျိုးကို တစ်ချို့တွေကျတော့ တိ့တိ့ကျကျ ပြန်ဖြေတတ်ကျတယ်၊ သူတို့တွေကတော့ အစောကြီးကတည်းက အကွက်ချပြီး စံနစ်တကျ စီစဉ်ထားတတ်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ လူမျိုးတွေမှာ ပြီးစလွယ် လုပ်တပ်၊ ပြောတပ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ဆိုးကြီးက တော်တော်လေးကို ဆိုးရွားပါတယ်၊ တိုးတက်နေတဲ့ နိူင်ငံက လူတွေဆိုရင် စီးပွားရေးတစ်ခု၊ အလုပ်တစ်ခု လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် စံနစ်တကျ အစီအစဉ်တွေစွဲ တွက်ချက်ပြီးမှ လုပ်ကျ ကိုင်ကျတယ်ဗျ၊ အဲ့ဒီတော့ သူတို့တွေ အောင်မြင်တာပေါ့၊
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အဲ့လိုဘဲ လွယ်လွယ်ဖြေတတ်တဲ့ အကျင့်ဆိုးက ရှိနေပြန်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ ဘ၀မှာ အောင်မြင်ချင်ရင်တော့ စံနစ်တကျ အကွက်ချပြီး ဘယ်အချိန်မှာ ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ Future Plan ကောင်းကောင်းတစ်ခုရှိဖို့လို အပ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ့် Personal Calendar တစ်ခုမှာ ဘယ်အချိန် ဘယ်အတိုင်းအတာ ရောက်ရင်ဖြင့် ငါဘယ်လို လက်မှတ်ယူမယ်၊ ဘယ်စာမေးပွဲတွေဖြေမယ်၊ အဲ့ဒီစာမေးပွဲတွေ ဖြေဖို့ လေ့လာချိန် ဘယ်လောက် စသည်ဖြင့် သတ်သတ်မှတ်မှတ်၊ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေကို စံနစ်တကျ အကွက်ချ ပိုင်းခြားပြီး လုပ်ဆောင်နိူင်အောင် ကျိုးစားနေပါတယ်...
အောင်မြင်တိုးတက် ချင်းသော သူငယ်ချင်းများကိုလည်း၊ စံနစ်တကျ အစီအစဉ်များရေးဆွဲ၍ မိ့မိ့လိုရာ ပန်းတိုင်ကို လျှောက်လှမ်း နိူင်ကျပါစေဗျာ....
Posted by Nay Linn Aung at 11:36 AM No comments:
“တန်ရာ တန်ရာ ” နှင့် “မတူမတန်” ဆိုတဲ့ စကားနှစ်လုံး ဘယ်လိုကွာခြားသလဲ၊ လူတိုင်းလူတိုင်း မှာ ကိုယ်ပိုင် အခွင့်အရေး လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ပြောဆိုခွင့်ရှိမှသာ လူမည်ပါလိမ့်မယ်၊ ဒီလူတစ်ယောက်နှင့် ထိုက်တန်တယ် မတန်ဘူးဆိုတာကို လူမှု အသိုင်းအ၀န်းမှာ ဘယ်လို ပေတံမျိုးနဲ့ တိုင်းတာလေ့ရှိသလဲ ဆိုတာကို စမ်းစစ်ကြည့်ကြရအောင်။
အမိ့နှင့်အဖ တို့မှမွေဖွားဆင်သက်ပေါက်ဖွားလာသော လူသားမျာပီပီ၊ ရှင်သန်နေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်ကျင်းအသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ကောင်းကျိုး ဆိုးမွေများကို ခံစားရမြဲပင်၊ ထို့အတူ မိမိ့တို့ရှင်သန် နေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်မှ အကျင့်စရိုက်များသည်လည်း ထိုသူများထံသို့ ကူးစက်စမြဲပင်၊ ဤသို့ဆိုလျှင် လူဆိုး၊ လူမိုက်တို့ နှင့် ပေါင်းသင်းနေထိုင်တိုင်း လူဆိုး၊ လူမိုက်ဟူ၍ ယူစ မရနိူင်ပါ၊ လူ၏အတွင်းစိတ်သည်သာလျှင် အဓိကဖြစ်ပေသည်။
လူသားမည်လျှင် အသက်အရွယ်နှင့် ရှင်သန်နေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လိုက်၍ ခံယူချက်၊ ရပ်တည်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်များ ပြောင်းလဲ တတ်ကျပေသည်။ လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်ရာ အလေ့အထ များသည်လည်း လူကို ပြောင်းလဲစေတတ်ပါတသည်၊ သို့ပါ၍ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်လာလေလေ အတွေ့အကြုံ ပိုများလာလေလေ ရင့်ကျက်မှု ပိုလာလေလေပင်ဖြစ်ပေသည်။ လူဆိုသည်မှာ အတ္တကိုယ်စိ ရှိတတ်ကျပေသည်၊ အတ္တဟူသည် လောဘ ဒေါသ မာန တို့၏ နောက်ဆုံး ရလဒ်ပင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ တစ်သီးပုဂ္ဂလဆန်သော အတ္တကြောင့် လူအများ ဒုက္ခသုက္ခ ရောက်သည်ဆိုလျှင် ထိုသူ၏ ကံကြမ္မာသည် မည်မျှဆိုးရွာလိမ့်မည်ကို ခန့်မှန်း မရနိူင်တော့ပါ၊
တစ်ချို့သောသူများကျတော့ သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးကို ငွေကြေးနှင့်တိုင်းတာ တတ်ကျတယ်၊ သေသေချာချာ စဉ်စားကြည့် ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေးတွေ သေသွားတိုင်းသူတို့ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ငွေဘယ်လောက်များ ယူသွားနိူင်တယ်လို့ကြားဖူးပါသလဲ၊ မသေခင်ကာလမှာသာ ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ ယှဉ်ပြီး မောက်မာ ထောင်လွှာနိူင်ပေမယ့်၊ သေသွားရင်တော့ အားလုံးအတူတူပါဘဲ။
လူတိုင်း လူတိုင်း ကိုယ်ချင်းစာ တရားရှေ့ထား၍ ဤလောက လူ့ဘောင်ကို ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သင့်ပေသည် မဟုတ်ပါလား ခင်ဗျား
လူတိုင်းလူတိုင်း အတ္တ၊ မာန လျှော့ပါး၍ အချင်းချင်း စည်းလုံးညီညွတ် ရိုင်းပင်း ကူညီနိူင်ကျပါစေ...
Posted by Nay Linn Aung at 1:49 PM No comments:
Posted by Nay Linn Aung at 1:40 AM No comments:
ငါပိုက်ဆံအတွက် Blog မရေးဘူး...
ငါရေးတာ ငါ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်၊ တွေ့ရှိချက် နဲ့ ငါကျွမ်းကျင်တာကို ချပြတာဖြစ်တယ်၊ ဘယ်တော့မှ သွေဖည်းပြီးလည်း ရေးဖြစ်မယ်မထင်ဘူး၊ ငါ့ကိုလှောင်ပြောင်နိူင်တယ်၊ သရော်နိူင်တယ်၊ ဝေဖန်နိူင်တယ်၊ တားစီး ပိတ်ပင်ခွင့်တော့ ဘယ်သူမျှမရှိ။
ထောက်ပြဝေဖန်တာကို ငါငံလင့်တယ်၊ မျှော်လင့်တောင်းတတယ်၊ ကြိုဆိုပါတယ်။
အသုံးအနှုန်းတွေ မာထန်ကောင်း မာထန်မယ်၊ မာနတက်တာမဟုတ်၊ ပြတ်သားခြင်းမျှသာဖြစ်တယ်၊ မပြတ်သားရင် ခံစားရမယ့် အတိုင်းအတာ ဘယ်လောက်ထိ့ရှိမလဲ ငါ့ကိုယ်တိုင်မသိ့၊ ခုရှုပ်မှ နောင်ရှင်းမယ်အဖြစ်မျိုးမို့ ပြတ်ပြတ်သားသား ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖော် ပြထားတာဖြစ်တယ်၊
ဆယ်စုနှစ် တော်တော်များများကို ငါဖြတ်ကျော်လာခဲပြီ၊ ခုထိငါ့ ဘာမှ မဖြစ်သေးဘူး၊ ဘယ်မှ မရောက်သေးဘူး မကျေနပ်ရင်တော့ ကိုယ့်ပေါင် ကိုယ်လှန်ထောင်ရုံဘဲရှိတယ်၊ ငါတို့ဘာလို့ အဲ့လို ဖြစ်ခဲ့တာလဲ၊
စေ့စေ့တွေး ရေးရေးပေါ်ဆိုသလို အဲ့ဒီခေါင်မိုး မလုံတဲ့ကိစ္စဘဲ ပြန်ပြန်ရောက်လာတယ်၊ ဒီကြားထဲ လေကတိုက်လိုက်သေးတယ်၊ မလုံတဲ့ ဒီခေါင်းမိုး လေနဲ့ ပါသွားတာမှ အေးသေးတယ်၊ အခုထက်ထိ ဒီလောင်းရိပ်အောက်က ငါတို့ မလွတ်မြောက်နိူင်သေးဘူး၊
စာများများဖတ်ပါ၊ လူမှန်နေရာမှန် တွေးခေါ် ချင့်ချိန်စဉ်းစားပါ၊ မှန်တာပြော ဟုတ်တာလုပ်နေတာကို ထောက်ခံသင့်ပါတယ်၊ ရင်ထဲက ဆန္ဒတွေ ပြန်မျိုမချနဲ့ ကိုယ့်လူတို့ရေ၊ ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်မှ အဲ့ဒီအသီးအပွင့်ကို ခံစားရမယ် မဟုတ်လား။
သေချာတာ ငါကတော့ ရပ်မနေဘူး၊ လက်တွေလှုပ်နေတယ်၊ ခေါင်းကစဉ်းစားတယ် အချိန်ရှိတိုင်းပေါ့လေ၊ ဒီသမုဒ္ဒရာ ၀မ်းတထွာ အတွက်လည်း လှုပ်ရှားရုန်းကန် ရင်းနဲ့ပေါ့။
ညီညွတ်စွာနဲ့ တွန်းလှန်ကျပါ၊ ဒီအတိုင်းနေရင် ခင်ဗျားတို့မျိုးဆက်တွေ ဒုက္ခများမယ်၊ အသိ့ပညာမဲ့မယ် နောက်ဆုံးဗျာ လူမျိုးတုံးမယ်...
ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသရောက်ရောက် မျက်နှာငယ်ရမယ်၊ ကောင်းတာ တစ်ခုမှ မရှိ့ဘူး၊ ပိုဆိုးတာက လူ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို လုံးဝအတိတ်မေ့သလို၊ တောင်းဆိုရကောင်းမှန်း သိ့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘဲ။
အမှန်ကို အမှန်တိုင်း မြင်နိူင်ပြီး၊ ကြိုးစားတွန်းလှန်နိူင်ကျပါစေ
Posted by Nay Linn Aung at 12:15 PM No comments:
ဆွေးမျိုးနီးစပ် ညီတစ်ယောက် ကျောင်းလာတက်တယ်ဗျာ၊ မလာခင် ကတည်းက အခန်းရှာပေးရတယ်၊ ပြီးတော့ လေဆိပ်သွားကြိုပြီး အခန်းလိုက်ပို့ပေးရတယ်၊ နောက်တော့ အတူတူနေဖို့ဖြစ်လာတယ် တတ်နိူင်ရင်ကျွန်တော်က ကိုယ့်ထက် အသက်ငယ်သူတွေနှင့် တရင်းတနှီး မနေချင်ပါ၊ အရိုအသေတန်မှာစိုးလို့လေ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း လူကြီးတစ်ယောက်လို့ ခန့်ခန့်နဲ့ စန့်စန့်ကြီး မနေချင်တာလည်းပါမှာပေါ့လေ။ အဲဒီလိုနဲ့ အတူတူနေမှ စရိုက်ကပေါ်လာတယ် အကြောင်းလည်း ပိုသိ့လာတယ်၊ ပျင်းလိုက်တာမှလွန်ရော
စားသောက်ပြီးတဲ့ ပုဂံခွက်ယောက်တွေကို တော့ဆေးကြောပါရဲ့၊ ချက်ပြုတ်ပြီး ဒီအတိုင်းထားတယ် တစ်ခါတစ်လေ မှိုတောင်တက်တယ်၊ ထမင်းသိုးတာကတော့ အရည်ကိုထွက်လို့၊ နောက်ဆုံးတော့ ဒီငပွကြီးဘဲ အကုန်လိုက်ရှင်းရတယ်၊ အလုပ်ကမောမော ပန်းပန်း ပြန်လာတိုင်း အဲ့ဒါကို ရှင်းလင်းရေးလုပ်ရတယ်ဗျ၊ ကျွန်တော် တစ်ခါမှ အပြစ်တင် စကား မပြောလိုက်ပါဘူးနော်။
အဲ့လိုနဲ့ ဖုန်းလိုင်းလျှောက်ချင်တယ် ဆိုတော့ သွားလျှောက်ကျတယ်၊ ကျောင်းသားဆိုရင် Deposit ၂၀၀ တင်ရမယ်ဆိုလို့၊ ကျွန်တော်ဘဲဖုန်းလျှောက်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ ဖုန်းစာချုပ်က ၂ နှစ် သက်တမ်းဆိုတော့၊ မလုပ်ခင်ကတည်းက နှုတ်ကတိ့နဲ့ နောင်ဖြစ်လာမယ့် အရာတွေကို တာဝန်ယူပါတယ်လို့ ပြောလာတော့၊ မျက်စိ့မှိတ်ပြီး လုပ်ပေးလိုက်မိတယ်၊ အဲ့ဒီ Deposit ကစတာဘဲ....
၁ နှစ်ကျော်ကျော်လေးမှာ ကျောင်းပြီးသွားတော့၊ ဖုန်းလိုင်းပိတ်ဖို့ တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ပြော ပေမယ့် တစ်ကယ်တန်း ပြန်ခါနီးကျတော့ သူ့လက်ထဲ ပိုက်ဆံလက်ကျန် နည်းမှာ စိုးတာနဲ့ ဖုန်းလိုင်မပိတ်ဘဲ ၂ လ၊ ၃ လ လောက် ခေတ္တ ရပ်ထားခဲ့တယ်၊ လိုင်းပြန်ပွင့်တာနဲ့ ကျွန်တော့်စီကို Reminder နဲ့ Bill တွေတန်းစီလာတော့တာဘဲ၊ နောက်ဆုံး Bill ကို မေးလ်ပို့လိုက်သေးတယ်၊ ရှေ့နေရုံးက စာလာရင်တော့ မင်းရှင်းရမှာလို့ပြောတော့၊ အဲဒီအထိ့ကို အေးအေးဆေးဆေးဘဲ။
နောက်ဆုံးသတိ့ပေးစာ ပို့ပြီးရှင်းဖို့ပြောတော့မှ ဇာတိ့ကစတာဘဲ၊ ဧပြီလ သင်္ကြန်ပြီးမှ ပေးပါရစေတဲ့၊ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိူင်ဘူး ကျွန်တော်စွဲဆန့်လာတဲ့ အချိန်တွေကများပြီ၊ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော်ကဘဲ လူလည်ကျပြီး မတော်မတရားလုပ်သလို ဖြစ်ကုန်ရော၊
မိ့ဘများ သားသမီးစကား ရုံတော့ စုံလုံးကန်းဆိုသလိုပေါ့လေ၊ ကျွန်တော့်ကို စစ်မယ်ဆေးမယ်ဖြစ်ကုန်ရော၊ ကျွန်တော်ကလည်း ရှိသမျှ စာရွက်စာတမ်း အပြည့်အစုံ ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်၊ နောက်ဆက်တွဲ ရလဒ်ကတော့ ကျွန်တော့် သိက္ခာထိ့ခိုက်မယ် စကားတွေကို သပုတ်လေလွင့် ယောကျာ်းတန်မဲ့ ပြောကုန်ရောဗျာ၊ ပိုက်ဆံရှိတိုင်း အရာရာကို အနိူင်ရလိမ့်မယ်လို့ ထင်ထားရင်မှားမှာပေါ့၊ ကိုယ့်စေတနာ ကိုယ်အကျိုးပေးမှာပါဘဲ၊
အဲလိုနဲ့ စောင့်လာလိုက်တာ တစ်လကျော်ကျော်ကြာသွားတယ်၊ ကျွန်တော်ယုံကြည်ရတဲ့ အဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့ အဖေကပါ ရှောင်ပြေးပါတော့တယ်၊ အော် ပိုက်ဆံရှိတဲ့ လူတွေများ ပိုက်ဆံနဲ့ ပတ်သက်လာရင် လိမ်ဖို့ ၀န်မလေးကျပါလား လို့ ကျွန်တော် ကောက်ချက်ချမိ့တယ်၊ ကျွန်တော့်ကိုယ်နှိုက်က သူတစ်ပါး အပေါ်မှာ သဘောထားပြည့်ဝလွန်းတာပါလေ၊ ဘယ်သူမပြု မိ့မိ့မှု ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ဘဲရှင်းလိုက်ရပါတော့တယ်ဗျာ။
Posted by Nay Linn Aung at 1:23 AM2comments:
လေထုညစ်ငြမ်းတာ၊ ရေထုညစ်ငြမ်းတာ ထက် စိတ်ဓာတ်တွေ ညစ်ငြမ်း ကြမ်းတမ်းကုန်တာက ပိုပြီးဆုံးရှုံးမှုပိုများပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ အမြဲပြောလေ့ရှိကျတယ် “လူ့သဘာဝ ဘဲလေ”ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်း သေသေချာချာ ပြန်တွေကြည့်ရင်၊ မဟုတ်တာ လုပ်ပြီးမှ အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကို တပ်မယ်ဆိုရင်တော့၊ အတော်လေးကို လွဲချော်နေသလိုခံစားရပါတယ်၊
တစ်ချို့ကျတော့ ပိုက်ဆံချမ်းသာတယ် စိတ်ဓာတ် အောက်တန်းကျတယ်၊ ယုတ်မာတယ်။ သက်ဆိုးရှည်တယ်ဗျ။
တစ်ချို့ကျပြန်တော့လည်း ဆင်းရဲတယ်၊ စိတ်ထားမြင့်မြတ်တယ်၊ စိတ်ချမ်းသာတယ်၊ အသက်မရှည်တတ်ဘူး။
လူဆိုတာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလိုက် မှီတင်းနေထိုင်ပြီး အပြန်အလှန် လေးစား၊ စာနာမှု ရှိမှသာလျှင် ဤလောကလူဘောင် အတွင်းဝယ် သာယာချမ်းမြေ့သော နေများစွာ ပေါ်ပေါက်လာမှာ အမှန်ပင်ဖြစ်ပေသည်။
Posted by Nay Linn Aung at 6:35 PM 1 comment:
ကမ္ဘာကြီး လုံးသလား၊ ပြားသလား ကျွန်တော်မသိ့ချင်ဘူး
အဲ့လိုဘဲ ငှက်အမျိုးအစား တော်တော်များများကို ကျွန်တော်ကွဲကွဲပြားပြား
မသိ့မေယ့်၊ သူတို့ကို ရှာရှာဖွေဖွေလိုက်ကြည့်ရတာကို ကျွန်တော်နှစ်သက်တယ်...
ဂစ်တာတစ်လက်နဲ့ သံစဉ်ရှာပြီး သီးချင်း မစပ်တတ်ပေမယ့်
ရစ်သမ်ညက်ညက်ကလေးခေါက်ပြီ သီချင်းငြီးနေရတာကိုလည်း ခုံမင်ပါတယ်.....
ကင်မရာ အကောင်းစားတစ်လုံး လွယ်ပြီး စတိုင်ကျကျရှိုးမထုတ်နိူင်ပေမယ့်
သဘာဝထဲက ပြန်မရယ် ပုံရိပ်တွေကို ဖမ်းယူထားနိူင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်နှစ်ခြိုက်ပါတယ်...
အဲလိုဘဲ စိတ်တိုင်းကျ အလိုရှိရာ စကားလုံးတွေကို ရေးတင်ထားနိူင်တဲ့
Blogger စာမျက်နှာတွေကို ကျွန်တော်မြတ်နိုးတယ်.....
Posted by Nay Linn Aung at 6:29 PM No comments:
ဆောင်းအကုန် နွေအကူ ပူပြင်းလှတဲ့ရာသီမှာ၊ လူတိုင်းလူတိုင်း အပူတွေငြိမ်းစေဖို့ မြန်မာ့ နှစ်ကူး အတာသင်္ကြန် အချိန်အခါ ရောက်လို့ လာပြန်ပါပြီ၊ နေရာ ဒေသအလိုက် ရိုးရာ အတာသင်္ကြန်ဆင်နွှဲပုံ ကွားခြားတာ မြန်မာလူမျိုးတိုင်းသိ့ပြီးဖြစ်ပေသည်။
ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ နေတာကတော့ မထူးပါဘူး၊ မူးပြဲကွဲပြီး ကျွဲတွေလို့ ရွှံလူးနေကျတာဟာ တော်တော်လေး စိတ်ညစ်စရာကောင်းသလို့ သရုပ်ပျက်လှပါတယ်၊ ကိုယ့်ရိုးရာ ယာဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းရမယ့်အစား အခုလိုအရှက်မဲ့တဲ့ အလုပ်မျိုးကို ဘာလို့များ လုပ်နေကျပါလိမ့်လို့ တွေးမိ့တယ်။
တို့ဘိုးဘွားတွေရဲ့ နှစ်သစ်ကူ အတာသင်္ကြန်မှာ DJ မပါဘူး၊ Whiskey မပါဘူး၊ ခွက်စောင်းခုတ်တာ မပါဘူး၊ ရွှံလူးတာ မပါဘူး၊ ငွေခွက်ထဲက နံ့သာရေကို သပြေခက်နဲ့ ပက်တဲ့ ချစ်စရာ အလေ့အထ ဘယ်ပျောက်ကုန်ပြီ မသိ့....
ဒိမယ် ကိုယ့်လူတို သောက်ချင်ရင် ခေါင်းစဉ်တပ်စရာမလိုဘူး ပိုက်ဆံရှိလို့ကတော့ ပုလင်းလဲ လူလဲစွဲလို့ရတယ်၊ မရောထွေးပါနဲ့၊ မဖျက်စီးပါနဲ့။
သင်္ကြန်ရဲ့ အေးချမ်းခြင်း ပုံရိပ်ကို အပူတွေလောင်းမထည့်ပါနဲ့၊
Posted by Nay Linn Aung at 5:59 PM No comments:
ညကတဖြည်းဖြည်း နက်လာပြီ၊ ကျွန်တော်အိပ်မပျော်သေးဘူး၊ ထထိုင်ပြီး စာရေးဖို့ကြိုးစားတော့လည်း ခေါင်းထဲက ဘာမှ ထွက်မလာဘူး၊ ကိုယ့်ရင်ဘတ် ကိုယ်ငုံကြည့်တော့ အိပ်ချင်မူးတူး ဖြစ်နေလေရဲ့.....
သူအိပ်ချင်ပေမဲ့ ကျွန်တော်က အိပ်ပျော်ဖို့ စိတ်ကူးလို့တောင်မရဘူး ဖြစ်နေတာ့၊ အခန်းထောင့်က စာကြည့်စားပွဲစီ ခြေထောက်တွေ သယ်ဆောင်ရာ အလိုက်သင့် သွားထိုင်လိုက်မိ့ပါတယ်၊ လက်တွေကလည်း သူအလိုလို ကျွန်ပျူတာ မော်နီတာကို ဖွင့်ပြီးသား တစ်ဆည်တည်း ဆိုသလိုမျိုး ခေါင်းထဲက စာသားတစ်ချို့ထွက်ကျလာတယ်၊ စာစရိုက်မလို့ လုပ်နေတုန်း ကျွန်တော်စိတ်ထဲ တစ်မျိုးလေးဖြစ်သွားသမို့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ညာဘက်အခန်းထောင့်ကို သေသေချာချာ စူးစိုက်ကြည့်မိ့တယ်၊ သေချာပါတယ် လူတစ်ယောက် ကြုံကြုံလေးထိုင်နေတယ်၊ နောက်တစ်ခု ပိုသေချာတာကတော့ အဲ့ဒီကောင် သူခိုးလုံးဝမဖြစ်နိူင်ဘူးဗျ၊ သူရောက်နေတာ တော်တော်လေးကြာ နေပြီဗျ၊ ကျွန်တော်သတိ့ မထားမိ့လိုဖြစ်လိမ်မယ်။
“ဟေး ... မင်းဘယ်သူလဲ၊ ဘာဖြစ်လို့ ငါ့အိပ်ခန်းထဲရောက်နေရတာလဲ”
ဘာမှပြန်မဖြေဘူး၊ ပေကပ်ကပ်လုပ်နေတယ်၊ ကျွန်တော်လည်း Flash Light ယူပြီး ထိုးမယ်လုပ်တော့မှ၊
“ဟေ့လူ ... ဓာတ်မိးနဲ့တော့မထိုးပါနဲ့ဗျာ၊ ကျွန်တော် တစ်ခါတည်း မာလကီးယားသွားလိမ့်မယ်ဗျ၊ ကျွန်တော်က...” “ည” ပါ....
“ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော် ည ပါ”
ခက်တော့နေပါပြီ၊ ဒီအရူးတစ်ကောင် ဘယ်လို လုပ်ပြီး အခန်းထဲဝင်လာပါလိမ့်၊ အလိမ္မာသုံးမှ ဖြစ်မယ်....
“ဒါဆိုလဲကောင်းပြီ မင်းဘာလို့ ငါ့အခန်းထဲဝင်လာပြီး ခုလိုတိတ်တိတ်လေး ထိုင်နေရတာလဲ”
“ကျွန်တော် တွေ့ကရာတွေသွားစားပြီး၊ ဗိုက်ထဲအခံရခက်တာနဲ့၊ ဂျွမ်းထိုးလိုက်တာဗျ၊ အထိုးလွန်ပြီး ခင်ဗျား အခန်းထဲရောက်လာတာဘဲ”
“ပြန်ထွက်မယ်လုပ်တော့၊ ခင်ဗျား အခန်းဝက အဘိုးကြီးက ပေးမထွက်ဘူး”
ဟေး.. ကြားသားမိုးကြိုး ငါလည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ အိပ်ဖန်စောင့် မခန့်ထားရပါကလား၊ ခက်တော့နေပြီ
အိပ်ချင်စိတ်တို့ ဘယ်လို့ အငွေ့ပျံသွားသည် မသိ့။
“မင်း ၀င်လာတုန်းက ဂျွမ်းထိုးဝင်လာရင် ဂျွမ်းထိုးပြီး ပြန်ထွက်သွားပေါ့ကွ...”
“ဟုတ်သားဘဲ.... ကျွန်တော်ကြိုးစား ကြည့်လိုက်ဦးမယ်”
ဒုန်း ဒုန်း ဂ လုန်း......
ဟိုက် အကျိုးနည်း ဘယ်ကဘယ်လို ရောက်လည်သည် မသိ့သသေား Royal Whiskey ပုလင်းပြားလေး ကျွန်တော့ ခြေထောက်နား လာကျတယ်လေ...
“ကဲ ခင်းဗျားတွေ့ပြီးလား အဲ့ဒါ ကျွန်တော့်ဗိုက်ထဲက ထွက်ကျလာတာဗျ၊ ဘာတွေးမှန်း မသိ့ဘူး စွတ်ရွတ်ပြီး ၀ါးမိ့တာ”
“ အခုတော့ ဒုက္ခရောက်ပြီး၊ ခင်ဗျား အခန်းထဲရောက်ကတည်း ကဘာဖြစ်တယ် မသိ့ဘူး၊ ကျွန်တော်ဂျွမ်းထိုးလိုမရတော့ဘူး”
“ထိုးလိုက်တိုင်း ဇောက်ထိုးကြီးဖြစ်ပြီး ရပ်ရပ်သွားတယ်”
“အဲ့လို ထွက်ကျလာတာတော့ ပထမဆုံး အကြိမ်ဘဲ”
ဘုရားရေ၊ သူပြောတာတွေ နားထောင်ပြီး ကျွန်တော်တောင် ရူးကြောင်ကြောင် ဖြစ်လာသလိုဘဲ...
ကြောက်စိတ်တော့ မ၀င်မိ့ဘူး၊ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဆိုစိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့ အကျင့်ကြောင့်ထင်တယ်၊ ထပ်မေးမိ့တယ်...
“ဟုတ်ပါပြီ၊ ဒါဆို မင်းဗိုက်ထဲမှာ ခုနပုလင်းပြားလေး လိုမျိုး အရာဝတ္ထုပညစ္စည်းတွေ ဘယ်လောက်ရှိနေသေလဲ”
“အင်း အနည်း ဆုံးခြောက်မျိုးလောက်တော့ ကျန်နေဦးမယ်ဗျ”
ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော်လည်း မျက်လုံးပြူးသွားတယ်ဗျာ..
“ခင်ဗျား မျက်လုံးကြီး အဲ့လိုပြူးနေတာ တော်တော်ရီစရာ ကောင်းတယ်နော်” တဲ့
သေတော့မှာဘဲ၊ အရေးထဲ အဲ့ဒီ “ည”ဆိုတဲ့ကောင်က ရီနေသေးတယ်၊ သတိ့ထားမိ့တာ သူ့ရီသံကိုက ခြောက်ခြောက် ကပ်ကပ်ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကိုဘဲ....
“မင်းကရီနိူင်သေးတယ်နော်၊ ငါမင်းကို ဘယ်လို ကူညီရမလဲ လို့စဉ်းစားနေတာဟ”
“အေးဗျာ တစ်ခုတော့ရှိတယ်၊ ခင်ဗျားမရွံတတ်ဘူး ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ထဲကနေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု နှိုတ်ထုတ်ပေးပါလားဗျာ”
အရေးထဲ ကျေးဇူးတွေလှိမ့်တင်နေပြန်ပါပြီ၊ ကျွန်တော် အပြေးအလွှား စဉ်းစားနေတာက တစ်ခါသုံးလက်အိတ်တွေ ဘယ်နားမှာပါလိမ့် ဆိုတာကိုဘဲဗျ
“အေး... ကောင်းပြီလေ၊ ဒါဆိုမင်းခနစောင့်၊ ငါပြန်လာခဲ့မယ်”
ပြောပြောဆိုဆို မီးဖိုချောင်းကို ထထွက်လာလိုက်ပါတယ်၊ တစ်ခါသုံး လက်အိတ်တစ်စုံ အကျနအ၀တ်ပြီး ပြန်ဝင်လာတာမြင်တော့။
“ခင်ဗျား လက်အိတ်ကြီးက အသည်းယားစရာကြီးဗျာ၊ အဲ့ဒါကြီး ကျွန်တော်ဗိုက်ထဲကျန်ခဲ့ရင် သုံးနှစ်လောက်တော့ ကောင်းကောင်း ခံစားရဦးမှာဗျ”
“ကဲပြော ဘယ်နေရာက နှိုတ်ထုတ်ရမှာလဲ၊ မင်းရင်ဘတ်ကို မခွဲဘဲနဲ့ ဘယ်လိုနှိုက်လို့ ရမလဲဟ”
“ရပါတယ် ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်က ပါဝါမတူဘူးလေဗျာ၊ ဒီအတိုင်းသာနှိုက်လိုက် သူအလိုလို ရင်ကွဲသွားလိမ့်မယ်”
ကျွန်တော်လည်း မချင့်မရဲနှင့် သာသာယာယာ ညရင်ဘတ်ကို လက်အိတ်စွတ်ထားတဲ့ လက်ဖြင့် နှိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ၊ ပုလင်းပုပု သေးသေးလေး တစ်လုံးစစမ်းမိ့တယ်၊ အသာဆွဲထုတ်ကြည့်လိုက်တော့၊ Spirulina ဘီယာ ပုလင်းပုလေး ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။
“အဲ့ဒီပုလင်းပုလေး ကျွန်တော့်ကို ဒုက္ခ အပေးဆုံးဘဲ”
“ကဲ ဒီတစ်ခါ တတိယမြောက် အရာဝထ္တကို နှိုက်ထုတ်မယ်”
ဒီတစ်ခါစမ်းမိ့တာက ရှည်ရှည်မျှောမျှောနဲ့ ရဘာဘူဖောင်းလိုအရာ ၀ထ္တုတစ်ခု၊ ဆွဲထုတ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ ဟိုက်ရှားဘား ပုတ်သင်ညိုပါလား။
“ဂျယ်လီ မှတ်လို့ ၀ါးမိ့ပါတယ်၊ ကြော်ငြာတွေ့မှ ပုတ်သင်ညိုဖြစ်မှန်သိ့တယ်”
“ဟေး ဟေး ငါ့အိပ်ခန်းထဲ မအံချနဲ့လေကွာ”
“ကဲကဲ မင်းလက်မြန်မြန် သက်သာအောင်၊ ငါမင်းရင်ဘတ်ကို ဆွဲခွဲထားမယ်၊ မင်းကနှိုက်ထုတ် ဟုတ်ပြီလား”
“အင်း အဲဒါပိုကောင်းတယ် မြန်မြန်ပြီးတာပေါ့”
ကျွန်တော် ညရဲ့ရင်ဘတ်ကို ဆွဲခွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ၊ ညနှိုက်ထုတ်လိုက်သော လက်ကျန်ပစ္စည်းလေမျိုးကတော့ဖြင့်
ဟော့ဒေါ့ အမှတ်ဖြင့် မျိုချလိုက်တော့ အတောင်ပံပါတဲ့ Eva ရယ်၊ ကြေမွနေတဲ့ ရီးစားစာ တစ်ထုပ်ရယ်၊ မှင်ကုန်နေတဲ့ ဘောလ်ပင်တစ်ချောင်းရယ်၊ ပြီးတော့ ကွဲနေတဲ့ကြည့်မှတ်တစ်ချပ်ရယ်ပေါ့။
“နောက်ကျုပ်ခုလို ဒုက္ခရောက်ရင်၊ ခင်ဗျားစီကိုလာမှ ထင်တယ်”
“ဒီမှာကိုယ့်လူ မင်းလာရင် ငါအိပ်ရေးပျက်တယ်၊ သန်းခေါင်မတိုင်ခင်လာချင်ရင်လာခဲ့”
“အဲ့ဒါတော့ မဖြစ်ဘူးဗျ၊ ကျွန်တော့်က သန်းခေါင်ကျော်မှ စပြီးဝါတီးဆွဲလို့ ရတာလေဗျာ”
“စိတ်ချပါ ကျွန်တော်ညတိုင်း ဒုက္ခမပေးပါဘူးဗျ”
“တစ်လ တစ်ခါလောက်ပေါ့၊ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ တွေ့သမျှ စွတ်ရွတ်မျိုချလိုက်တာ ခုလိုဖြစ်ကုန်ရောဗျာ”
“မင်းကို ကူညီပြီးစကားပြောရတာ ငါအိုက်သလိုလိုဘဲ၊ ပြတင်းပေါက်ဖွင့်ဦးမှပါ”
“ဟေး... ၊ ညဆိုတဲ့ကောင်ထအော်တယ်”
ဘယ်လုအူကြောင်ကြောင်ကောင်လဲဆိုတဲ့ အကြည့်နှင့် ကျွန်တော်သူ့ကိုကြည့်တော့ ပြုံးပြတယ်၊ ဒီကောင့်သွားတွေး ဖြူဖွေးနေတာ သတိ့ထားမိ့တယ်။
“ကျွန်တော်လစ်လို့ ရပြီလေ၊ ခင်ဗျားက ကျွန်တော့်အတွက် တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးလေ”
“ကျေးဇူးဘဲဗျာ၊ ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ညကို ရင်ခွဲကုသပေးတဲ ခွဲစိတ်ဆရာခင်ဗျားကို ကျေးဇူးပါ”
“မင်းကျေဇူးတွေ ငါ့အိပ်ခန်းထဲပြည့်သွားဦးမယ်ဟ ဖြေးဖြေး”
“နောက်လည်း ခုလို ဒုက္ခတွေရင်လာခဲ့ပါရစေနော်”
“ငါကူညီနိူင်တာဆိုရင် ဘယ်သူ့ကိုမဆို ငါအကောင်းဆုံးကူညီပါတယ်၊ အချိန်မရွေး မင်းလာနိူင်ပါတယ်”
ညထွက်သွားတော့မှ ကျွန်တော်လည်း အခန်းရှင်းလင်း၊ ကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီး အိပ်ရာဝင်ခဲ့ပါတယ်၊
မနက်နေတော်တော် မြင့်တောမှ ကျွန်တော်အိပ်ရာနိူးပါတယ်၊ ညတုန်းကေတော့ ခွဲစိတ်ခန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်အိပ်ခန်း၊ အခုတော့ သူဘာမှ မသိ့သလိုနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးဘဲဗျ။
ပြီးတော့သတိ့ထားမိ့တာက၊ အိပ်ရာဘေးကဖတ်လက်စ စာအုပ်တစ်အုပ်၊ စာအုပ်အမည်က “ညကို ရင်ခွဲကြည့်ခြင်း”တဲ့ဗျ....
Posted by Nay Linn Aung at 7:35 PM No comments:
မင်းဒီကို မလာခင်၊ မင်းကစ ဆက်သွယ်တာလား၊ ငါဆက်သွယ်တာလား၊ မင်းနေဖို့ အခန်းဆိုလို ငါ့မှာ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ လိုက်ရှာရတယ်၊ လာတော့လည်း လေဆိပ်ဆင်းကြိုပြီး လိုက်ပို့ရတယ်။ နောက်တော့ မင်းအဲ့ဒီအခန်းမှာ အဆင်မပြေဘူး၊ ငါလည်း အလုပ်နဲ့ နီးနီး နေမလို အခန်းရှာတော့ မင်းအတူတူ နေချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ ငါတို့ အတူနေဖြစ်ကျတယ်၊ အဲ့ဒီတုန်းက မရှိအတူ ရှိအတူ ငါတို့နေခဲ့ကျတယ်။
မင်းစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ ဟင်းချက်စရာ ၀ယ်လည်းငါ၊ ဘီယာဝယ်လည်းငါ၊ တစ်ခါတစ်ခါ ငါမသောက်ဖြစ်ရင် မင်းသောက်ဖို့သက်သက် ၀င်ဝယ်ပြီး ငါသယ်လာတာပါ။ မင်းကို ငွေရေးကြေးရေး နဲ့ပတ်သက်ပြီ ငါပေးစရာရှင်းစရာမရှိပါဘူး၊ မင်းသာ အသုံးကြမ်းလို့ ပြတ်လတ်ရင် ငါ့စီကချေးတယ်၊ နေပြီး တော်တော်နဲ့ ပြန်မရဘူး၊ ငါအိမ်ကို ပိုက်ဆံပို့ပြီး လက်ကျန်နည်းနေတော့မှ ငါမတောင်ချင်းဘဲနဲ့တောင်းရတာပါ။
ငါလည်းတစ်ခါတစ်ခါ မင်းစီကချေးပါတယ်၊ ငါကအကြီးဆိုတော့ မင်းတောင်းစရာမလိုဘဲ ပြန်ဆပ်ပါတယ်။ ငါဘယ်တုန်းကမှ မင်းစီမှာ အကြွေးတင်မကျန်ပါဘူး၊ လေဆိပ်မှာ တောင်းတဲ့ ၂၀ မင်းမေ့နေတာပါ၊ မင်းစီက ငါရစရာရှိတယ်၊ မင်းပြန်ခါနီး အိမ်မှာ သောက်မလို့ ပစ္စည်းတွေ ၀ယ်တုန်းက ဘယ်လောက်ကုန်လဲ လိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပေးမယ် ဆိုတာ မှတ်မိ့လား၊ အဲ့ဒီတုန်းက မင်းကိုငါပေးစရာရှိတာကို မပေးနဲ့တော့ အစ်ကိုစိုက်ဝယ်လိုက်ပါ လိုတာကျွန်တော် ထပ်ပေးမယ်လိုပြောတာ ဘယ်သူလဲ ? နောက်ပြီးတော့ မင်းနဲ့ငါ အသက် (၁၀) နှစ်လောက်ကွာတယ်ငါ့ညီ မင်းမူးမူးလာရင် ငါအိမ်ကို ငါဘာသာငွေပို့တဲ့ကိစ္စ မင်းနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လို ဆရာလုပ်တာလဲ ငါစဉ်းစားလို့မရဘူး၊ ငါဘယ်သူ့စီကမှ ပိုက်ဆံချေးပြီး အိမ်ကိုမပို့ဖူးပါဘူး၊ ငါ့ပညာနဲ့ငါ ထိုက်တန်တဲ့လစာကို ခြိုးခြံသုံးပြီး အိမ်ကိုပိုတာပါ၊ ငါ့လိပ်ပြာငါသန့်ပါတယ်။
အခုဖြစ်တဲ့ဖုန်းကိစ္စ လိုင်းမလျှောက်ခင်ကတည်းက ငါမင်းကိုပြောတယ် ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာ မင်းတာဝန်ယူပါမယ်ဆိုတဲ့ စကားကြောင့် ငါလျှောက်ပေးလိုက်တာပါ၊ ငါကိုယ်တိုင် ဖုန်းခ SGD 1700 လောက် ဆောင်ခဲ့ရတော့၊ ငါလည်းကြောက်တယ်၊ ငါပိုက်ဆံလာရှာတာပါ၊ ပိုက်ဆံဖြုန်းဖို့လာတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ မင်းမပြန်ခင် မင်းလိုင်းပိတ်မယ်ပြောတယ်၊ တစ်ကယ့် တစ်ကယ့်တမ်းကျတော့ မင်းမပိတ်သွားဘဲ ခေတ္တလိုင်း pause လုပ်သွားတာပါ၊ အဲ့ဒါမင်းသိ့ပါတယ်။ မင်းပြောတော့ ဖုန်းခကြေပြီးပြောတယ်၊ မင်းပြန်မှ ကြွေးကျန်တယ်စာလာလို့ မင်းစီတောင် ငါပို့လိုက်ပါသေးတယ်။
လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသလိုရှင်းရှင်းကြီးဘဲကွာ မင်းလိုင်းပိတ်သွားတယ်ဆိုခဲ့ရင် ငါကဘယ်လိုလုပ်ပြီး မင်းဖုန်းနံပါတ်ကို ဆက်သုံးလို့ရမလဲ၊ လူတိုင်းတွေးရုံနဲ့တင်သိ့သာပါတယ်။
မင်းကိုငါဖုန်းဆက်တော့ ပထမတော့ အချိုသပ်ပြီးပေးမယ်ပြောတယ်၊ နောက်တော့ သင်္ကြန်ပြီးမှ ပေးပါရစေလို့ပြောတယ်၊ နောက်တော့ နေမိုးသန့်စီလွှဲမယ်လို့ပြောတယ် မင်းစဉ်စားကြည့်စမ်းပါ ဘယ်သူလွန်သလဲလို့၊ ငါမင်းအဖေ စီဖုန်းဆက်တော့လည်း၊ ငါ့အသံမှန်း မင်းသိ့သိ့နဲ့ ဘယ်သူလဲ၊ အဖေအိမ်မှာ မရှိဘူးလို့ ပြောတာလည်းမင်းပါဘဲ။
ငါဘက်ကို စဉ်းစာကြည့်လေ၊ ငါဒေါသထွက်တော့ ဆဲမိ့တယ်၊ အဲ့ဒါကို မင်းကအခွင့်ကောင်းယူ ပုံကြီးချဲပြီး မင်းအပြစ်လွတ်အောင် ကလိမ်ကကျစ်ဥာဏ်သုံးတယ်၊ ငါမင်းအမေကို တောင်းပန်ဖို့ ၀န်မလေးပါဘူး၊ အချိန်မရွေးနေရာမရွေး တောင်းပန်နိူင်တယ်၊ မင်းငါ့ကို ပြောဆိုတာတွေကိုလည်း ပြန်တောင်းပန်ဖို့စဉ်းစားထားပါ၊ ငါကဆဲလိုရိုင်းတယ်ဆိုရင် မင်းကငါ့ထက် ပိုအောက်တန်းကျတယ်၊ မင်းကငါ့ရဲ့ ယုံကြည်မှုကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ငါ့ကိုပါ သပုတ်လေလွင့် သတောင်းစား သာသာပြောတယ်၊ လူဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကိုယ် ကြည့်ကျရင်တော့မှန်တယ်ထင်မှာဘဲ၊ မင်းသေသေချာချာ စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ ငါ့ညီ လူရဲ့ တန်ဖိုးက ပိုက်ဆံနဲ့ တိုင်းတာလို့မရဘူး၊
မင်းမပေးလည်း အဲ့ဒီပိုက်ဆံ ငါဆောင်ရမှာဘဲ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကို ငါ့ကညီတစ်ယောက်လို သဘောထားပြီး ယုံကြည်မိ့တာကို၊ ငါ့အလုပ်ကို အထိ့ခိုက်မခံနိူင်ဘူး၊ ပိုက်ဆံရှာရတာလွယ်ပါတယ်၊ နာမည်ကောင်းရဖို့မလွယ်ဘူး၊ ပြောရရင် ငါတော်တော်လေးကို အံ့သြ နောင်တရမဆုံးဖြစ်ရတယ်။ အခုငါကိုယ်တိုင်တောင်မှ Prepaid ကဒ်ဖုန်းဘဲကိုင်ထားပါတယ်၊ အားလုံးကို သေသေချာချာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြစ်သွားအောင်လို့ ဒီစာကို နောက်ဆုံးအနေနဲ့ မင်းစီကို ပို့တာပါ။
Posted by Nay Linn Aung at 11:25 AM No comments:
ကျွန်တော် စာမရေးတတ်ဘူး၊ သူများတွေဖတ်ကောင်းအောင် ရေးချင်တယ်၊ စာဖတ်အားနည်းတာလည်းပါမှာပေါ့လေ။
ကျွန်တော်လက်တွေလှုပ်ရှားပြီးတိုင်း ကျွန်တော်နောင်တမရချင်သလို၊ သိပ်လည်းအားမရဘူးဗျာ၊ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ စာရေးဆရာဖြစ်နေတဲ့သူ ရှိသလို၊ တရားဟောဆရာလည်း ရှိတယ်ဗျ၊ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ သံယောဇာဉ်တွယ်တာစရာ မရှိခဲ့ရင် တရားဟောဆရာ လုပ်မယ်လို့ စိတ်ကူးမိ့တယ်၊ ဘုရားအလိုတော်မရှိဘူး ထင်တယ်ဗျ။
အလွန်တရာမြတ်နိုးတွယ်တာစရာ ကောင်းတဲ့ မိ့သားစုလေးကို ၂၀၀၂ မှာ ကျွန်တော်နဲ့သူမ စတင်တည်ဆောက်ကျတယ်၊ အခုထက်ထိ့ကို တက်ညီလက်ညီ ရှိတုန်းပါဘဲ။ နားလည်မှုတွေကိုယ်စီ ရှိထားလေးတော့ ဘယ်နေရာ ဘယ်ကိုရောက်ရောက် အဲ့ဒီသံယောဇာဉ်လေး နှစ်မျှင် ကျွန်တော့်ရင်ထဲ အမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဗျ၊
အားတိုင်း ချချရေးဖြစ်တယ်၊ သိပ်အဆင်မပြေတာတွေတော့ Draft ထဲမှာ ခုထိ့တော်တော်များများ ရှိနေသေးတယ်၊ အသက်အရွယ်ရလားလို့ ဖြစ်မယ်၊ တစ်ခါတစ်ခါ ကိုယ့်ခေါင်းထဲမှာ စာသားတွေကောင်းတွေ ပေါ်လာတတ်တယ်၊ ခက်တာက ချမရေးထားမိ့ရင် အငွေပျံသွားတာဘဲဗျ၊ မှတ်စု စောင့်လေ့မရှိတော့လည်း ခက်သားလား
တစ်ချို့တွေက ကျွန်တော့်ကိုလှောင်ကျတယ်၊ တစ်ချို့တစ်လေကတော့ အားပေးပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကို ကျွန်တော်သိပ်ပြီး ဂရုမစိုက်အားဘူးဗျ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်လက်ရာတွေက သိပ်ပြီး ချာတူလန်နေသေးတယ် ထင်လို့ပါ၊ ငယ်ငယ်တုန်းက စားကျက်စာဖတ်ပြင်းနဲ ဒဏ်တွေလည်းပါမယ်ထင်တယ်။
နောက်တစ်ခု သေချာက ကျွန်တော့်လက်ရေးကို မြင်ရင်ရီကျလိမ့်မယ်၊ ပဲပင်ပေါက်ကို အမြှီးဖြတ်ပြီး စာရွက်မှာ ကပ်တာ ပိုတောင် လှနေနိူင်ပါတယ်၊ တော်သေးတာက ကျွန်တော် မြန်မာစာ ကောင်းကောင်းရိုက်နိူင်တယ်ဗျ၊ ပြောချင်တာ လူငယ်တွေ ခေတ်ကို အမှီလိုက်နေတဲ့ လူငယ်တွေ စာများများဖတ်ပါ၊ မှတ်ပါ၊ ကောင်းသင့်သော် အတွေးအခေါ်များကို ဆန်းသစ်သထက် ဆန်းသစ်အောင်
ထပ့်ဆင့်တွေးခေါ်ကြည့်ပါ၊ ရတာကို ချရေး အဲ့ဒါ တစ်ကယ်လိုအပ်ပါတယ်။
Posted by Nay Linn Aung at 11:23 AM No comments:
မသိ့ကိန်းများ စုံစည်းရာ ???
မနက်မိုးလင်းတိုင်း စရူမိ့တဲ့ ၀င်သက်ထွက်သက်တိုင်းမှာ လိုအပ်ချက်တွေ တော်တော်များ ပါဝင်လာတဲ့နေ့ရက်တွေ ဘယ်တော့များမှ ကုန်ဆုံးမည်မသိ့....
နေ့ရက်တိုင်းပုံမှန် လည်ပတ်နေကျ စက်ယန္တရားများကဲ့သို လှုပ်ရှားသွားလာရသည်မှာ လွန်စွာခက်ခဲလှပေသည်၊ ခင်မင်တွယ်တာ တတ်သော နှလုံးသားတစ်စုံ ဘုရားသခင်က အဘယ်အတွက်ကြောင့် ပေးအပ်ခဲ့လေသိမသိ့...
ဒီအသိ့ဥာဏ်၊ ခံစားမှု နှင့် အတတ်ပညာ များကို ဖန်ဆင်းခဲ့သော ဘုရားသခင်ကကို အပြစ်တင်ရမည်ဆိုလျှင် မည်ကဲ့သို တုန့်ပြန်ကျမည်မသိ့...
ဒီခရီး ဘယ်အတိုင်းအတာ အထိ့ ငါဆက်သွားရဦးမှာလဲ၊ ဘယ်ပုံနဲ့ ခရီးဆက်ရဦးမလဲ၊ ကြမ်းတမ်းမယ်၊ ဒုက္ခများမယ်၊ အဆင်ပြေကောင်းပြေမယ်၊ ကြုံတွေ့ရသမျှ ကြံ့ကြံ့ခံနိူင်ဖို့ ကြင်သူနှစ်ယောက် ငါ့မှာရှိတယ်၊ ငါ့ရဲ့ မသိ့ကိန်းတွေကို သူတို့လည်းမသိ့...
အသွေးအသားကို ဈေးကစားသလိုမျိုး ကံကြမ္မာကို ဈေးကစားခဲ့ရင် အရှုံးအမြတ်အတွက် ခင်ဗျားဘယ်လိုစဉ်းစားသလဲလို့ မေးခဲ့ရင် ဖြေစရာ အဖြေကို မသိ့...
ကျွန်တော်အလိုချင်ဆုံး ကင်မရာတစ်လုံးရယ်၊ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးရယ်၊ ဂစ်တာတစ်လက်ရယ် ကျွန်တော့် မိ့သားစုလေးရယ် တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဘယ်တော့မျာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရမည်မသိ့...
ကိုယ့်အတ္တကိုယ် ထမ်းပိုးပြီး ဘ၀ခရီးရဲ့ ရေစုန်ရေဆန်ထဲမှာ ခရီးသွားဧည့်သည်ချင်း ကူညီရိုင်းပင်းရမယ်အစား ဘယ်အတွက်ကြောင့် ထိုင်ခုံလုတမ်း ကစားချင်ကျသည်ကို မသိ့...
လူဘ၀ဟာရခဲးလွန်းလှသလို တိုးတောင်လွန်းတာ လူတိုင်းသိ့ပေမယ့်၊ ကြိုတင်မသိ့နိူင်တဲ့ မနက်ဖြန်ပေါင်းများစွာကို ဖြတ်ကျော်ဖိုး အားအင်များ ဘယ်ကရမည်ကို မသိ့...
ငါဟာ ငါမဟုတ်တော့သလို၊ ငါမရှိတဲ့နေ့ရက်များစွာ ငါကိုယ်တိုင် ဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ခဲ့လေသည် မသိ...
Posted by Nay Linn Aung at 9:32 PM No comments:
Blogger နဲ့ ကျွန်တော်...
ကျောက်ခေတ်မှာ ကျောက်သားပေါ် စာထွင်းတယ်၊ နောက်တော့ ကျောက်သင်ပုန်း၊ ပြီးတော့ စာရွက် စာအုပ်တွေ ဖြစ်လာခဲ့တယ်၊ အဲ့ဒါ စာပေ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Media တွေကို ကျွန်တော် သိ့မြင်သမျှပေါ့လေ၊ အခု IT ခေတ်ကြီးထဲရောက်ပြန်တော့ ကမ္ဘာရွာကြီး ဖြစ်လာသမို့ Forum, Portal & Blog ဆိုပြီးတော့ Media အသစ်အသစ်တွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု မိတ်ဆက်လာကျပါတယ်။
အဲ့ဒီအထဲမှာ ကျွန်တော့်အသည်းစွဲ ကတော့ Blogger ပါဘဲ၊ လွယ်ကူတယ် ရိုးရှင်းတယ် လုံခြုံစိတ်ချရတယ်၊ စသုံးမိ့ကတည်းက တစ်နေ့ တစ်ခေါက်လောက် မသုံးရရင် ကျွန်တော် တစ်မျိုးကြီး ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်၊ Blogger တစ်ယောက်ရဲ့ ကျင့်ဝတ်တွေကို ကျွန်တော်လိုက်လေ့လာမိ့တယ်၊ အမှန်တော့ဗျာ ကျွန်တော်တို့လို့ Blogger တွေက True Story ကိုပိုပြီး Contribute လုပ်သင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်ယူစပါတယ်၊ အဲ့ဒါမှလည်း ကိုယ့်ရဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်ကို လေးစားရာ အကျိုးပြုရာရောက်မှာပေါ့၊ ကျွန်တော့်လို စကားပြေဘဲ ရေးတတ်တဲ့သူအဖို့တော့ ကျွန်တော့် အယူအစက မှန်ကောင်း မှန်ပါလိမ့်မယ်၊ တစ်ချို့ တွေကျပြန်တော့ ရသမြောက်အောင် ရေးတတ်သမို့ ဖတ်ပြီးတာနဲ့တင် ခေါင်းထဲမှာစွဲမြဲနေလောက်ပါတယ်
ကျွန်တော့်ရဲ့အားလပ်ချိန်တော်တော်များများကို Blogger ကပိုင်ပါတယ်၊ GTalk လာပြောမယ့် ကြင်နာသူကို စောင့်ရင်း Blogger ပေါ်မှာ ကျွန်တော့် ခံစားမှုတွေကို အံချနေရတာ ခုဆိုရင် ၁နှစ်နှင့် ၇လ တင်းတင်းပြည့်ပြီဗျ၊ အိမ်မှာဆိုရင် မီပြတ်တာနဲ့ ကိုယ့်ဝင်ငွေကလည်း Computer တစ်လုံး ၀ယ်သုံးနိူင်ဖို့ မပြောနဲ့ မိ့သားစု အတွက် မနည်းကို ကျားကန်ထားရတာနဲ့တင်ကို ဘာမှ စိတ်မကူးနိူင်ဘူးလေ၊ စိတ်ကူးတယ်ဆိုလို့ စိတ်ကူးယာဉ်သက်သက် လိုတော့ မယူစပါနဲ့ဦးဗျ၊ တစ်ခါတစ်ခါ ကိုယ်သိ့တာ တတ်တာကို ဝေမျှတယ်၊ ခံစားချက်ကို တင်ပြတယ်၊ ရသတစ်ခုခုလည်း ရစေချင်ပါတယ်။
ဒီမှာက ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေ မဟုတ်လေတော့ စိတ်ဖိ့စီးမှုက နှစ်စလောက်ပိုပါတယ်၊ သွားလာ နေထိုင်စားသောက်တာကို အမြဲသတိ့မပြတ်နေရသလို အလုပ်ခွင်မှာ အဆင်ပြေအောင် ပိုပြီး ကြိုးစားရတယ်၊ တစ်ခါတစ်ခါ ကိုယ့်စိတ်ထဲ ရူသွင်းနေရတဲ့လေကိုက တစ်မျိုး ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဗျာ၊ မိ့သားစုကို လွမ်းပြီဆိုရင်တော့ ပိုလို့တောင်ဆိုးပါသေးတယ်၊ တစ်ခါ တစ်ခါ ရန်ကုန်က ပုလင်းတူ ဗူးဆို့ ညီအစ်ကိုတွေကို သတိ့ရတယ်၊ သူတို့နဲ့ ၀ိုင်းဖွဲ့ဖို့ ဆိုတာ ကျွန်တော့်အတွက် မဖြစ်နိူင်ဘူးလေဗျာ၊ ဒီမှာက အဲ့ဒီဇိမ်ခံပစ္စည်း အသုံးအဆောင်တွေက ဈေးတအားကြီးလွန်းလှပါတယ်၊ အလွန်အကျွံလုပ်လိုက် ရင် တစ်လလုံး ရေသောက် ဗိုက်မှောက် ဆိုသလို ဖြစ်နိူင်တယ်ဗျ၊ အိမ်မှာဆိုရင်တော့ ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပေါ့ဗျာ၊ ကိုယ့်မြေ ကိုယ့်ရေမဟုတ်ဆိုတဲ့ အသိ့က တစ်ခါတစ်ခါ လုံခြုံမှု သိပ်မရှိသလိုခံစားရပါတယ်၊ အဲ့ဒါတွေကြောင့် စိတ်ဖိ့စီးမှုနှစ်စပိုတယ်လို့ ဆိုတာပါ။
အလုပ်အဆင်ပြေပေမယ့် နေထိုင်စရိတ်ကထောင်း မိ့သားစုကို စိတ်တိုင်းကျ မထောက်ပံ့နိူင်တဲ့အခါ ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော်အလိုမကျ ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်၊ ငါဘာလို့ အဲ့လောက် အသုံးမကျသလဲပေါ့လေ၊ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါလေတော့ သေသေချာချာ ပြန်စမ်းစစ်ဖြစ်တယ်၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး အစစ အရာရာ ငါတို့ ဘာလောက်နောက်ကျန်နေခဲ့သလဲ ဆိုတာကိုပေါ့ဗျာ၊ ခေါင်မိုးမှ မလုံတာ မိုးယိုတာ မဆန်းဘူးပေါ့ဗျာ၊ မလုံတဲ့ခေါင်ကို ပြုပြင်မွမ်းမံဖို့ နိူင်ငံသားတိုင်း တာဝန်ကိုယ်စီရှိတယ်လို့ ကျွန်တော့်ခံစားမိ့တယ်ဗျာ၊ တတ်နိူင်တဲ့ဘက်ကပေါ့လေ။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့်ဘက်က အကောင်းဆုံး အတတ်နိူင်ဆုံး ဖြစ်အောင်လုပ်တယ် ကူညီတယ် လုပ်ဆောင်တယ်ဗျ၊ အဲ့ဒါကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ထဲက အမှန်တရားပေါ့လေ၊ စိတ်ထားကောင်းကောင်း ထားတော့ ကိုယ့်အတွက်လည်း မကောင်းမသင့်တာတွေ မဖြစ်နိူင်ဘူးလေဗျာ၊ ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်မှ ကူညီစောင်မမည့်သူ တစ်ယောက်မဟုတ်တစ်ယောက် ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်၊ လူတိုင်း လူတိုင်း စိတ်ထားကောင်း၍ ကံကောင်းနိူင်ကျပါစေဗျာ။
Posted by Nay Linn Aung at 3:52 PM No comments:
နာဂစ်အလွန် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ပြုပြင်ရေးတွေ ပြီးကာစမှာ ကျွန်တော် ပြည်ပကို ထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့ ပြင်းပြင်း ပြပြ စဉ်းစားပြီး အာရုံစိုက် လုပ်ကိုင်လာပါတယ်၊ ဒီလိုနဲ့ဘဲ ၂၇ မေလ ၂၀၀၈ မှာ ကျွန်တော် ဒီကျွန်းပေါ် စရောက်လာပါတော့တယ်၊ ကျွန်တော်မိ့သားစုနဲ့ အတူလေယာဉ်ကွင်းဆင်းတော့ သားသားရယ်၊ မြတ်ကလေးရယ် ဘာမှ မဖြစ်သလို့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဘဲဗျ၊ Check in counter ကိုတက်သွားတော့မှ စတာဘဲ သားသားကလည်းငို၊ မြတ်ကလေးလည်းငိုလို့ ကျွန်တော်လည်း မျက်ရည်ဝဲလို့ပေါ့ဗျာ၊ Boarding Lobby ရောက်တော့ ကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်ဖို့ ရပ်စောင့်နေတယ် ကိုယ်အရှေ့က ဖုန်းဆက်နေတဲ့ အမျိုးသမီးက တော်တော်နဲ့ မပြီးနိူင်ဘူး၊ သားသားနဲ့ မြတ်ကလေးကို နှုတ်ဆက်မလို့ပါ၊ တော်တော်ကြာတော့မှ လက်စသတ်သွားတော့ ဖုန်းကို အမြန်ကောက်ကိုက်ပြီး ခေါ်လိုက်မိ့တယ်၊ တစ်ဖက်က ငိုသံတွေကို ကြားရပြန်တော့ ကျွန်တော်ပါ ငိုချင်လာပြန်တယ်၊ သားသားနဲ့ မြတ်ကလေး ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ဖို့ အထပ်ထပ်မှာပြီး ဖုန်းကို မချင် ချချင်နဲ့ ချပြီး လှည့်ထွက်ခဲ့ပါတယ်၊ ကိုယ့်နောက်က တန်းစီနေတဲ့သူတွေကို လေးစားရမယ်လေ။
ထိုင်ခုံအစွန်းဘက် နေရာလွတ်တစ်ခုမှာ ၀င်ထိုင်ရင်း တစ်ယောက်တည်း တိတ်တိတ်ကြေကွဲနေလိုက်တယ်ဗျာ၊ လေယာဉ်ပေါ်တက်ပြီး လေပေါ်စတက်တော့ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ထဲက တစ်ခုခု ကျကန်ခဲ့သလို ခံစားနေရတယ်၊ မျက်စီမှိတ် အံကြီတ်ပြီး ခနလောက်တော့ နားလိုက်တယ်ဗျာ တော်တော့ကို ပင်ပန်းလွန်းလှပါတယ်၊ ဒီလိုနဲ့ Changi ကိုရောက်တော့ မြင်ကွင်းတွေ ကအပြောင်ပြန်ဖြစ်ကုန်တယ်ဗျ၊ Public phone တွေကလည်း နေရာတိုင်း နီးပါး ရှိတယ်၊ Local နံပါတ်တိုင်းကို ကောက်နှိပ်ပြီးခေါ်လို့ရတယ်ဗျ၊ အဲ့ဒီမှ စတွေ့ တာဘဲဗျာ...
ဒီလိုနဲ့ လာကြိုတဲ့သူငယ်ချင်း လင်မယားကို ဖုန်းဆက်ရတယ်၊ အဲ့ဒီတုန်းက အရက်ဝယ်ဖို့ မသိ့သေးဘူးဗျ၊ ကျွန်းပေါ်မှာ .75 ဘဲရှိတယ်ဆိုတာနောက်မှ သိ့တာကိုဗျ။ အဲ့လိုနဲ့ Check Point ရောက်တော့ လူများနေတဲ့ queue မှာမစီဘဲ တော်သင့်တဲ့ queue မှာသွားစီဖြစ်တယ်၊ လေယာဉ်ပေါ်မှာ white card မဖြည့်ဖြစ်ခဲ့လို့ check point နားရောက်မှဖြည့်ရတယ်ဗျာ၊ ကျွန်တော် queue စိနေတုန်း Singaporean and PR Only ဆိုတဲ့ counter က officer ကလှမ်းခေါ်တယ်ဗျ၊ အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း သူ့ counter ကို ရောက်သွားတာ့ပေါ့ဗျ၊ passport ပေးလိုက်တယ် ပြီးတော့ air ticket တောင်းကြည့်တယ်၊ " How long you want to stay in Singapore ?" လို့မေးတယ်ဗျ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့် air ticket က တစ်နှစ်စာဖြစ်နေတာကိုး၊ ကျွန်တော်ကလည်း "I would like to stay one month only" လို့ဘဲ ခပ်တည်တည် နဲ့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဗျာ၊ အဲ့ဒီတော့မှ သူ့အလုပ်သူဆက်လုပ်တယ် ပြီးတော့မှ ကျွန်တော်လည်း Lagged Belt ရှိရာကို ဆက်ထွက်လာလိုက်ပါတယ်၊ ကိုယ်ပစ္စည်းတွေ ကောက်ပြီးတော့ အထွက်ရောက်ခါနီးမှာ xray ဖတ်တယ်ဗျ၊
အပြင်ရောက်တော့ သူငယ်ချင်းစုံတွဲက ငါတို့ MRT နဲ့ဘဲသွားမယ်ဆိုတော့ သွားလေလို့ ပြန်ပြောတယ်၊ ကျွန်တော့်မှာက ဘာမှ သ်ိပ်များများစားစား ပါတာမှမဟုတ်တာကိုးဗျ၊ Service counter ရောက်တော့ e-Zlink ကဒ်ဝယ်တယ် Card Reader မှာ Tapping လုပ်ပြီး ရထား ပလက်ဖောင်းပေါ် ထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်၊ MRT ပေါ် စတက်တက်ခြင်း ကျွန်တော့်ခံစားမိ့တာက လေကောင်းလေသန့်တွေကို တစ်ဝကြီးရှုလိုက်ရတာကိုပေါ့ဗျာ၊ သူတို့ အခန်းကိုရောက် ကျွန်းအချိန် 5:45 pm ဖြစ်နေပြီဗျ ရောက်ရောက်ချင်း GTalk နဲ့ဘဲ စကားပြောရတာပေါ့ဗျာ၊ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရောက်တယ်၊ အဆင်ပြေတယ် ပါတယ်ပေါ့။ ညနေကျရင် ကျွန်တော်နေရမယ့် အခန်းကို အခန်းဖော်ညီလေး တစ်ယောက်နဲ့ ပြောင်းရဦးမယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲ့လိုပြောပြီး ထပ်မှား မိ့တယ် သားသားနဲ့မြတ်ကလေးကို ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ဖို့ပါ။ ရေမိုးချိုးပြီးတော့ သူငယ်ချင်းက ဖုန်းကဒ် လိုက်ဝယ်ပေးတယ်ဗျ၊ အခန်းဖော်ညီလေးကလည်း သူ့မှာ ပိုနေတဲ့ hand set ကို ဌားပေးပါတယ်၊ အဲ့ဒါနဲ့ ဖုန်းကိစ္စ ကအဆင်ပြေသွားတယ်။ ညနေရောက်တော့ ကျွန်တော်တို့ နေမယ့် အခန်းကို ချီတက်ကျတယ်ပေါ့ဗျာ
ရောက်ရောက်ချင်းဘဲ အခန်းခနဲ့ စပေါ်တစ်လစာ ထွက်ပါလေရောဗျာ၊ ငါတော့ အလုပ်ရမှ ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေက ကျွန်တော့်ကို တစ်နင့်တစ်ပိုးနှိပ်စက်ကျတယ်ဗျာ၊ နှစ်ပတ်လောက်သာ ကြာတယ်ဘာမှ သိပ်မထူးခြားသလိုဘဲ၊ သုံးပတ်မြောက်တဲ့နေမှာ Walk in တစ်ခုရတော့ သွားဗျူးပါတယ် CCTV ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာပါ၊ အဆင်ပြေတယ် Job Training စဆင်းဆိုတော့ ကျွန်တော် အတော်ပျော်သွားပါတယ်၊ အဲ့ဒီမှာလည်း မြန်မာညီလေး တစ်ယောက်ရှိနေတော့ ကျွန်တော့်အတွက်က အဆင်ပြေသွားတာပေါ့ဗျာ၊ နှစ်ပတ်လောက် အလုပ်ဆင်းနေတုန်း နောက်ရုံးတစ်ခုကလည်း Interview ထပ်ခေါ်တယ်ဗျ၊ အဲ့ဒါနဲ့ ဘဲ အပြေသွားဗျူးဖြစ်တယ်၊ သွားဗျူးပြီးကတည်းက ကျွန်တော်စိတ်ကူးထဲ အဲ့ဒီရုံးမှာ အဆင်ပြေရင်ကောင်းမယ်လို့ စဉ်းစားပြီး ဆုတောင်းမိ့တယ်ဗျ၊ နောက် CCTV ရုံးက S-Pass တင်တော့ Reject ဖြစ်ပါလေရောဗျာ၊ အဲ့ဒီနေ့ ကျွန်တော် စိတ်ညစ်နေတုန်း ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ရုံးက Second Interview ခေါ်တော့ ကျွန်တော် တော်တော်လေး ပျော်သွားတယ်ဗျ၊ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အလုပ်ကို ဘုရားအလိုတော်ရှိလို့ရခဲ့ပါတယ်
အခုဆိုဘာလိုလိုနဲ့ ၂ နှစ်ပြည့်ခါနီးပြီဆိုတော့ တော်တော်လေးတော့ ကျင့်သားရနေပြီဗျ၊ အိမ်လွမ်းတာတော့ အရင်အတိုင်းပါဘဲဗျာ၊ တစ်ခါ တစ်ခါ တော်တော့်ကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ခံစားရပါတယ်၊ ဘာဘဲပြောပြောခုလို ရင်ဖွင့်ခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးပါ၊ အားလုံးရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ကျပါစေဗျာ။
Posted by Nay Linn Aung at 3:02 PM No comments:
ဘ၀မှာ ငါ ဘာတွေ...
ခါသီးခြင်း၊ မုန်ခြင်း ဆိုတဲ့ တရားတွေကို
ငါ ဘယ်လောက်စုဆောင်း မိ့ခဲ့သလဲ
Posted by Nay Linn Aung at 1:57 PM 1 comment:
မြေကြီးကလာတဲ့သူ မြေကြီးထဲ ပြန်ဝင်ရမှာ
နောင်လာ နောက်သားတွေ အတွက်
ဆယ်စု နှစ်တွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု
အရူးကတစ်မူးသာ တယ်လို မထင်လိုက်ပါနဲ့
ရူးရူး မူးမူးကို စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်
12:00 am on Earth !
Posted by Nay Linn Aung at 1:33 AM 1 comment:
“ ဖောင်းပွခြင်း သီအိုရီ (၁)”
သူတို့ ငါ့ကို ရန်တွေကျပြန်တယ်
ငါ့ရင်ထဲက မေတ္တာ တရား
Posted by Nay Linn Aung at 12:16 PM No comments:
“ ကမ္ဘာတည် သရွေ့”
အရှေ့ကို မရောက်စေရဘူး ဟေ့
အရင်ဆုံး ပြုပြင် ထုဆစ်
ကမ္ဘာမြေ အတွက် လာခြင်း
သူက ငါတို့ ကို တစ်ချိန်လုံး
Posted by Nay Linn Aung at 12:56 PM No comments:
“ အိပ်မက်ဆိုးရဲ့ ဒိုင်ယာရီ ”
တစ်ခါ တစ်ခါငါတွေမိ့တယ် ..............
နှစ်ပေါင်း ၂၀ မကတော့ဘူး
ရည်စူးပြီး တိုက်ဖျက် ကျမယ်ဟေ့ ................
တရားတယ် မတရားဘူး အော်နေရုံကတော့
ငါလို လူပြိန်းတောင်လွယ်လွယ် လုပ်တတ်ပါတယ်
ငါ့ဘ၀သက်တမ်း ၁၀ စုနှစ်ကျော်က
ငရဲခွေးတွေ ကိုက်ကျ ဟောင်ကျ
သောင်းကျန်း ကျပုံများ အော့ နှလုံး နာစရာမို့
အဲ့ဒီ့ သမိုင်း မှတ်တိုင်းဆိုးကို
ရိုက်ချိုးပြီး ခေါက်သိမ်းထား မယ့်အစား
မင်းတို့ ငါတို့ မှာ တာဝန်ရှိတယ်
Posted by Nay Linn Aung at 1:13 PM No comments:
“ ဖြတ် ”
ငါတို့အားလုံး ဖြတ်တောက်ခြင်း ခံရတာ
နှစ် ၂၀ ဆယ်ကျော်လာပြီဟ..............
လူမျိုး နှင့် နိုင်ငံကို ပါ ဖြတ်တောက်
Posted by Nay Linn Aung at 12:25 PM No comments:
“ အမှားများ နှင့် ကခုန်ခြင်း ”
သူတို့တောင် ငါ့ကို တော်တော်
အမှားများစွာ Char Char ကနေလေရဲ့
အဲ့ဒီ Equation ကို....
ငါရှာဖွေ မှီငြမ်းရ မလဲဆိုတာ Online တက်ပြီး
အချည်းနှီး ဖြစ်ချေပြီ တကား...................
Posted by Nay Linn Aung at 9:27 AM No comments:
" လူကျောက်ရုပ် များသို့ ပေးစာ (၁) ”
ဘာလိုများ ငါတို့ ပြောခွင့်မရှိတာလဲ.............
ရပိုင်ခွင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါလျှက်နှင့်
ဘာလိုများ ငါတို့ လုပ်ကိုင်ခွင့် မရှိတာလဲ..................
အော်အော် နေတတ်တဲ ငနဲတွေ
လူဖြစ်အရှုံး ခံမလား ?
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ထုဆစ်မလား ?
ကိုယ်ပိုင် အိပ်မက် တစ်ခုစီတော့
ကိုယ့် ကိုယ် ကို ညာနေသူတွေ
ကိုယ့် ရင်သွေးတွေ အတွက်
Posted by Nay Linn Aung at 11:56 AM No comments:
၀ယ်သောက်ဖို့ ငါ့မှာ အဿပြာမရှိ
၁၀ စုနှစ် သုံးခုစာငါရှင်သန်ခဲ့တဲ့
ကမ္ဘာမြေကြီး ကျန်းမာပါစေဗျာ ..............
Posted by Nay Linn Aung at 2:18 PM No comments:
ဟော့ဒီကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ တောင်ပြေး မြောက်ပြေးနဲ့
လောဘ ဒေါသ မာန်မာနတွေ
ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး အများအတွက် စတေးနေသူတွေလည်းရှိတယ်ဗျ
ဒုက္ခဆိုတဲ့ ငနဲ ခဏခဏ နှိပ်စက်တာ ခံရပါများလို
ကျွန်တော် အရေခွံတောင် တော်တော်ထူလာပြီ
ကျွန်တော့် ဂီတာအိုလေးကို သတိ့ရတယ်
နေ၀င်မိုးချုပ် ရုံးဆင်းလို့ အိမ်အပြန်
သားသားနဲ့ မြတ်ကလေးကို သတိ့ရတိုင်း
Ear Plug တပ်ထားရတယ်
Posted by Nay Linn Aung at 7:46 PM No comments:
“ အလင်းအိမ်ရဲ့ နောက်ဆုံးနေများ”
အလင်းရောင် ပျပျ ဟိုးရှေးမှာ ရှိနေတယ်
ရှေ့ဆက်လျှောက်မလား နောက်လှည့် ပြန်မလား
လူဆိုတာ ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေး
အများအတွက် တောင်းဆိုရဲ လုပ်ကိုင်ရဲတဲ့သူ
ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ ကြားမှာ
ကျုပ်ကိုယ်တိုင် ဘေးထွက် ထိုင်ရတဲ့အဖြစ်မျိုး
စာရိတ္တတွေ ချချရောင်းနေရတဲ့ အဖြစ်
ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲ၊ ဒီပဲနဲ့ ဒီပုတ်
ဘ၀တွေ ဘယ်လောက်များများ ချချနင်းခဲ့ပြီလဲ
သူတို့အလှည့်ပြီးရင် ခင်ဗျား တို့ကိုယ်တိုင်
Posted by Nay Linn Aung at 6:02 PM No comments:
လေထဲမှာ တိုက်အိမ် ဆောက်တာ အခါခါ
လေပွေဆိုးတွေ ဒုက္ခပေးပြီးရင် လေပြေညှင်းတို့ ရဲ့
ပွေ့ဖက်နှုတ်ဆက်မှု ကို မျှော်လင့်မိတာ တော့အမှန်ပါ
အချိန်ရှိခိုက် လေထဲမှာ လမ်းလျှောက်ကြစို့ သူငယ်ချင်း
အိမ်မရောက်ခင် မင်းနဲ့ ငါ တစ်ခွက်တစ်ဖလား လောက်တော့
"One for the road" လုပ်လိုက်ကျရအောင်
အိမ်ရှင်မ မျက်နှာ သကာရေ လောင်းထားသလိုမျိုး
ကိုယ်ကတော့ အတိတ်ကို အရိပ်လိုဘဲ
ကြာတော့ အော်ဂလီ ဆန်လှပေါ့
ဒါတွေ မပြောတာဘဲ ကောင်းပါတယ်
Posted by Nay Linn Aung at 6:00 PM No comments:
ကျွန်တော် စာမရေးတတ်ဘူး၊ သူများတွေဖတ်ကောင်းအောင် ရေ...